April 2014 ~ SAI SENG SERK
ပပျှူမ္ဂဿ (3)္ဓြှုဝျြး
ပပျှူမ္ဂဿ (3) "လ္ဂဿးဢ္မျြှူဝျ တြ္ဒှ္မျူး္မုမျှ" လဿှုပ္မိျုဢိတျှဢ္ဒျှ္ဒြှ္မျြှးဝ္မျးထှီူ 12.07.2020 ယဝျှ္ဓြူှု။
တှီုမ္ဂဿတှငျး ပ္ဂငျသ္မှ္ဒျ္ဂ္မျမိူငျး မိူဝျှုငျးလဿှုသူငျှသငျ္ဓှူးသ္မှ္ဒျ္ဂ္မျမိူငျး ပ္ဒျှုမိူဝျး္ဓ္မိျုးတှီု မိူငျြးိရိပျှူပိငျး
မိူဝျှုငျးှူုဢဝ္ဓျ္ဂဝျှြူငျြးဵ္မျး္ပိူဝျှ္ပူ္ဂတျှု ငဝျှ္ပုိုငျှုလှဿတဿးလ္လငျး တေမြးတှငျှုထ္ဂမျ္ဒှူ္ဒှုုလှငျှုလှငျှု။
ပပျှူမ္ဂဿ (2)္ဓြှုဝျြး
ပပျှူမ္ဂဿ (2)"္ပုမျးသ္ဒိျုးမိူငျးဝြျှူမျြှူမျှု လ္ဒျုှူတှီုလျမြး" လဿှုပ္မိျုဢိတျှဢ္ဒျှ္ဒြှ္မျြှးဝ္မျးထှီူ 26.06.2019 ယဝျှ္ဓြူှု။
္ဓ္လပျး္ဂြငျှု မ္ဂဿတှငျး္ဓူးသ္မျှ
္ဓ္လပျး္ဂြငျှု မ္ဂဿတှငျး္ဓူးသ္မျှြူငျြးဵ္မျး္ပိူဝျှ္ပူ္ဂတျှ္ပု္မျှူငဝျှ္ပု္မျှ္ဒူ္ဂငျ ငဝျှ္ပုိုငျှု လှဿတဿးလ္လငျး
တှီုမ္ဂဿတှငျး ဝ္မျးတ္မျှ္ပုမျှုလ္ဒျုှုဢ္မျှြူငျြးဵ္မျး္ပ္မျှူသုင္ပျှမျးှူုယျြ္ဒှ္မျူးလူငျ (RCSS/SSA)
္ပဝျြှုဝျပဝျလူင္ပျှမျသ္ဒိျုးလူငျယှတျှုသ္ဒိျု လဿှုမြးလှေပ္မျ္လြငျး္ပျြလ္ဒျုြှုဵ္မျးလြှ္ဓုးသ္မျှ
ဘဝအတွက် ကြိုးစားနေချိန် ဒါတွေ ရှောင်ပါ
ပျင်းရိနေရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုကို တော်တော်နဲ့ မရောက်ဘူး။ ပြောတုန်းကတော့ စီမံကိန်း ချတုန်း ကတော့ မိုးလားကဲလားနဲ့ တကယ်လည်း လုပ်မယ်ကျတော့ နေပူတယ်၊ မိုးရွာတယ်၊ ဇာတ်ကျောတတ်တယ်၊ ခေါင်းကိုက်တယ်၊ ဖျားတယ်နဲ့ဆို တော်တော်နဲ့ ခရီး မရောက်တော့ဘူးလေ။ ဒီတော့ မပျင်းဖို့လိုပါတယ်။
လောကီလူသားပေးပဲ။ တစ်ခါခါ ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ ကြုံတတ်မယ်။ ငါဘာလုပ်နေတာ ပါလိမ့်။ ဒါကို လုပ်လိုက်တော့ကော ငါ့အတွက် ဘာထူးလာမှာလဲ။ အဲ့ထက်ဆိုးတာက တစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်နေရင်းတန်းလန်း ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားတာမျိုးပေါ့။ အဲဒါ တွေဝေတာ။ ကြိုးစားနေသူ တစ်ယောက်က မတွေဝေဘူး။ ခဏလေး ပျင်းလို့ ဟိုတွေးဒီတွေး လုပ်လိုက်တာနဲ့ တွေဝေ သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ တွေဝေရင် ဘဝခရီးနှောင်နှေးပါတယ်။
ဖြစ်တောင်မလာသေးဘူး။ ငါလုပ်ကောလုပ်နိုင်ပါ့မလား။ ငါ့အတွက် လုံလောက်တဲ့ Resource တွေ ရှိကော ရှိရဲ့  လား။ လုပ်လိုက်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ရလဒ်က သေချာပါ့မလား အစရှိသဖြင့် စိုးရိမ်စိတ် ဝင်တတ် ကြပါတယ်။ ဒါတွေက မလုပ်ခင် မလျှောက်ခင်ကတည်းက Plan ချထားရမှာလေ။ အဲဒါတွေ မချထားရင်တော့ စိုးရိမ်စိတ်က အမြဲလိုလို ဝင်နေမှာပဲ။
ငါ့ဘော်ဒါတွေများ၊ သူတို့တွေများ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ၊ ညာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ၊ ငါ့ကျတော့ ဘာမှ ဖြစ်မလာသေးပါလား အစရှိသဖြင့် အားငယ်စိတ်က တော်တော်များများ ဝင်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လို ဝင်စရာမလိုပါဘူးကွယ်။ သူတို့လည်း ထမင်းစား၊ တို့လည်း ထမင်းစားပေမယ့် ဘဝပေး ကုသိုလ်၊ ကံကြမ္မာကြောင့် သူတို့မြန်မြန် ဖြစ်သွားကြတာပဲ။ (ဘာဖြစ်တာလဲတော့ မသိဘူး) ကိုယ်က ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကို သူတို့ စောစော စီးစီး ရှာမှီးခွင့် ရတယ်လို့ သဘော ထားလိုက်။ ဘာကြီးဖြစ်မှ၊ ညာကြီးဖြစ်မှ အောင်မြင်တယ်လို့ မခေါ်ဘူး။ ကိုယ်ကျင်လည်နေရတဲ့အခြေအနေထဲမှာ စိတ်အကျေနပ်ဆုံး အကောင်းဆုံး ဖန်တီးလိုက်နိုင်ခြင်းကလည်း အောင်မြင်ခြင်း တစ်မျိုးပဲ။ ပြီးတော့မှ နောက်တစ်ဆင့်တက်ပေါ့။ ဒီတော့ တွေးပြီး အားငယ်နေမယ့်အစား သူတို့ထက် ပိုပြီး ကြိုးစားဖို့ အားရှိနေလို့ နောက်ကျ တယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက် ထားရပါမယ်။ လုံးဝ အားမငယ်ပါနဲ့။
ထူးဆန်းတယ်ဟုတ်။ မထူးဆန်းပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့နေရလို့ပါ။ လူတွေက ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ အရမ်း Romantic ဆန်သွားရင် ရောင့်ရဲသွားတတ်ကြပါတယ်။ တော်ပြီလေ။ တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာ နေရတာမျိုးမဟုတ်တောင် တိုက်ခန်းလေးတစ်လုံး နဲ့ နေရရင်ပြီးပါပြီဆိုတာမျိုးနဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက် တွေကို အတိုက်စားခံလိုက်ကြတယ်။ စိတ်ညစ်နေတုန်း အားပေးဖော်လေးရှိ၊ ပင်ပန်းနေတုန်း ရေတိုက်မယ့်သူရှိ တာက ကောင်းပေမယ့် ဘယ်သွားသွား ခြေတောက်မှာ တွဲပါနေမယ့် ကျောက်ခဲတုံးကြီးဖြစ်နေရင်တော့ လုံးဝ မကောင်းဘူး။
စိတ်နှလုံး ယာယီပျော်ရွှင်မှုအတွက် အတ္တစိတ် နည်းဖို့အတွက် ပေးဆပ် တယ်ဆိုတဲ့ အချစ်မျိုးက လိုအပ်တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အလုပ်လုပ်နေလည်း ဖုန်းတွေဆက်၊ ညအိပ်လည်းဆက်၊ မအိပ်လည်းဆက်၊ တစ်ပတ်မှာ ၇ ရက်တွေ့၊ တွေ့တော့ ၂၄ နာရီ၊ ၈ နာရီက အပြင်မှာ ၈ နာရီက အွန်လိုင်းမှာ အိပ်ချိန်တောင် ညက အိပ်မက်ဆိုး မက်လို့ ကိုကို့ကို သတိရလုိ့ပါ ဘာညာနဲ့ မိမိရဲ့ တိုးတက်ချင်တဲ့ စိတ်ကလေးတွေ ရောင့်ရဲ သွားကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီတော့ ချစ်တော့ ချစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Target တစ်ခုထားပြီး ကြိုးစားနေစဉ် ကာလမှာ အဆိပ်တော့ မတတ်ပါနဲ့။ ဖြေဆေးမရှိပါဘူး။ ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ကျရှံးစေမယ့် အကြောင်းပြချက် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ထွက်ပေါက်၊ စိတ်ထွက်ပေါက်ဆိုပြီး ဘော်ဒါတွေနဲ့ သောက်လိုက်မယ်။ စားလိုက်မယ်။ ကဲလိုက်မယ်။ လုပ်တော့ လုပ်ပေါ့။ ဒါကိုလည်း Limit လေးတော့ ထားလေ။ ကိုယ်လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ကို ပျက်ပြားလောက်အောင် အပျော်တွေ အရမ်းများနေရင်လည်း မကောင်းဘူး။ ပြီးတော့မှ ငါ့ကို အရက်ဝိုင်းတိုက် ကောင်တွေ သူတို့ကျတော့ Project ပြီးသွားပါလားဟ ဆိုပြီး နောင်တတွေ ရနေလိမ့်မယ်။ အချို့ က ကိုယ့် အောင်မြင်မှုအတွက် တစ်ဖက်သားကို လမ်းလွဲအောင်လုပ်ဖို့ ဝန်မလေးဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုအချိုသတ်ပြီး ဆီစမ်း ပဲဆီနံလေး မွေးလိုက်တာလို့ ရေရွတ်နေရင်း ဘဝပျက်သွားပါမယ်။ အချို့ ကျတော့လည်း ဘယ်သူမှ မဖျက်ပဲ ကိုယ်တိုင် ဝါသနာနဲ့ကို ပျော်တတ်တာလည်း ရှိတယ်လေ။ Limit လေးနဲ့တော့ ကဲကြပေါ့။ အိနြေ္ဒရရလေး ပျော်နိုင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ထပ်လောင်းပြောချင်တာက ကြိုးစားနေတဲ့ ဘဝရဲ့  အရသာဆိုတာဟာလည်း ပန်းတိုင်ရောက်မှခူးဆွတ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အသီးမသီးသေးပေမယ့် အရွက်တွေ ခူးပြီး ဟင်းစားလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျ ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ အချို့ က Quality of Life ကိုမေ့သွားကြတယ်လေ။ ဒီတော့ အောင်မြင်မှုအတွက် ပန်းတိုင်ကို ထားရှိပေမယ့် ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကတော့ စက္ကန့်တိုင်းဟာ ပန်းတိုင်ပါပဲ။
အားလုံး ကြိုးစားရကျိုးနှပ်တဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေ။
Sae Hark Maine
၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း အကြောင်း
10:02 AMMYOPINION No comments
၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း အကြောင်း သုံးသပ်ချက် - ၁
(က) ၀ လူမျိုး နှင့် ၀ အထူးဒေသ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ( အပိုင်း ၁)
(ခ) တပ်မတော် အစိုးရ နှင့် ၀ အထူးဒေသ ဆက်ဆံရေး ( အပိုင်း ၂ )
(ဂ) တရုတ် နိူင်ငံ နှင့်ဝအထူးဒေသ ဆက်ဆံရေး ( အပိုင်း ၃ )
(ဃ) သုံးသပ်ချက် ( အပိုင်း ၄ )
(က) ၀ လူမျိုး နှင့် ၀ အထူးဒေသ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
၀လူမျိုး တွေဟာ မွန်- ခမာ အုပ်စု မှဝ ပလောင်ကွဲ အုပ်စုမှာ ပါဝင်ပါတယ် ရှေးယခင်က တည်းက ယေဘုယျ အားဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ၊ မိုင်းမောနှင့် ကျိုင်းတုံ ခရိုင်ကြား မှာနေ ထိုင်ကြပြီး အရှေ့ပိုင်း ဖက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်နှင့် အနောက်ဖက်မှာ သံလွင်မြစ် တို့ကြားမှာ နေထိုင်ကြပါတယ် ....
“၀”လူမျိုး ကို .ပေစာ၊ ကျောက် စာတွေအရ“၀”၊ လ၀၊ လ၊ လွ ဟု ခေါ်ဝေါ် အက္ခရာ တင်ထားတာ တွေ့ ရှိရပြီး ကိုလိုနီခေတ် မှာတော့ “၀” ဒေသ ကို “WA”(WA STATE) လို့ ပဲ ..သတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ်တာကို တွေ့ ရပါတယ် ၀ တွေဟာ .တောင်တက် တောင်ဆင်း ကျင်လည်ပါတယ် .ရှေးယခင်က ခေါင်းဖြတ်ပြီး ယာဇ် ပူဇော် သည့် ဓလေ့ ထွန်းကားပါတယ်။
ယာဇ်ပူဇော်လျှင် ကောက်ပဲသီးနှံ ထွန်းကားပြီး ရောဂါဘယ နည်းပါးတယ် လို့ အယူရှိ ပါတယ် လူစိမ်း ကို သိပ် မနှစ်မျို့ တဲ့အ တွက် ၀ နယ်အတွင်းရှိ ကျန်လူ မျိုးစုများ ဟာ တစ်နယ်နှင့် တစ်နယ် လည်း ရှေး ယခင် ကတည်းက သိပ် တည့်လေ့မရှိပါဘူး မဟာမိတ်ပြုလျှင်တော့ ရှေး ဓလေ့ ထုံး တမ်းအရ ….တစ်နယ်နှင့် တစ် နယ် ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ ဆုံပြီး …ကျွဲ ကို သတ် ....ခွဲဝေယူလေ့ရှိကြပါတယ် ….
ငွေဒင်္ဂါး နှင့် ကျည်ဆန်ယမ်းတောင့်များကို အရက်ထဲ ထည့်ပြီး ထိုသစ္စာ အရက်ကို သောက်ကာ ငွေဒင်္ဂါး ကျည်ဆံများကို အညီအမျှ ခွဲယူပြီး အရေးကြုံရင် တစ် နယ်နှင့် တစ်နယ် ကူညီကြတယ် လို့…သိရပါတယ်….
ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု အားဖြင့် ခရစ်ယာန် ၂၀ % ဗုဒ္ဒဘာသာ ၃၀ %နှင့် ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မှု ၅၀ % ဖြစ်ပါ တယ် အထင်ကရ ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ပွဲတော် တွေ ကတော့ .ကောက် သစ်စားပွဲ ခရစ် စမတ်ပွဲနဲ့ရိုးရာနတ် ပူဇော် ပသပွဲတွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ် …
၁၉၅၈ ခုနှစ် မတိုင်မီ လောက်ထိလူကို ခေါင်းဖြတ် ယစ်ပူဇော် ပြီး ဆန်စပါးဖြစ်ထွန်းဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ .လုပ် ဆောင် မှု ဓလေ့ ရှိခဲ့သေးတယ် လို့ သိရပါတယ် ၀ ဒေ သ မြို့ ရွာများ ဟာ အမြင့်ပေ ၅၀၀၀ အထက်မှာ အားလုံး နီးပါး တည်ရှိပါတယ် ကိုလိုနီခေတ်မှာတော့ ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသခံ စော်ဘွားတွေကပဲ ၀ တွေ ကို အုပ်ချုပ် လာ ခဲ့ပါတယ်...
၁၉၃၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ မှာ….ဝနယ် နယ်နိမိတ် စုံစမ်းရေးအတွက် ….တရုတ်-ဗြိတိသျှ ပူးတွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ကို ...ခန့်အပ် ခဲ့ကြပါတယ် ကော်မရှင် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌမှာ ကာနယ် အက်ဖ် အိုက်စ လင်ဖြစ်ပြီးကော်မရှင် အဖွဲ့ကို အိုက်စလင် ကော်မရှင် ဟူ၍ ခေါ်တွင် ခဲ့ပါတယ် ….
အဲဒီ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဟာ သမိုင်း အဆက်ဆက် မပြီးမပြတ် ခဲ့တဲ့ တရုတ်- ဝ နယ် နယ်နိမိတ် ကြောင်းကို ၁၉၃၅-၃၆ နှင့် ၃၇ ခုနှစ်များမှာ စုံစမ်း စစ်ဆေးပြီး အဖွဲ့ ရဲ့ တွေ့ရှိချက် နဲ့ ထောက်ခံ ချက်တွေ အရ .ဗြိတိသျှ နှင့် တရုတ် အစိုးရတို့က ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ၀နယ် နယ်နိ မိတ်ကြောင်းကို သတ်မှတ် ခဲ့ကြ ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် တရုတ် အစိုးရ အနေနဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ထဲက တစ်ချို့ ကိစ္စတွေကို တော့ သိပ် ကျေလည်လှ တယ် မဟုတ်ပါဘူး.ဒါကြောင့် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ၁၉၆၀ ဇန်န၀ါရီ ၂၇ မှာ တရုတ်-မြန်မာ နယ်နိမိတ် စာချုပ် အသစ် ချုပ်ဆိုပြီး နယ်နိ မိတ်ကို ပြန်လည်သတ် မှတ်ရာမှာ ၀ နယ်က ပန်ဟန်နဲ့ ပန်လပ် ဒေသ နှစ်ခုကို တရုတ် ပိုင် အဖြစ် …ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ် …
၁၉၄၇ ခုနှစ် နယ်ခြားဒေသ အစီရင်ခံစာ အရ ၀ ဒေသမှာ လူဦးရေ ၈၃၀၀၀ ရှိခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် စာရင်းအရတော့ လူဦးရေ ၆သိန်း ခန့် ရှိ ပါတယ်….
လွတ် လပ်ရေး ရပြီးချိန် ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှစပြီး ၀နယ် ကိုးကန့် နယ်မိုင်းလွန်း နယ်တို့ ကို ရှမ်းပြည် အ ရှေ့ မြောက် အထူး ခရိုင် လို့ဖွဲ့ စည်း အုပ်ချုပ် ခဲ့ပြီး၁၉၆၂ တော်လှန်ရေး အစိုးရ လက်ထက်မှာ တော့အဲဒီခရိုင် ဟာ ကွမ်းလုံ ခရိုင် ဟူ၍ ဖြစ်လာပါတယ် ....
လက်ရှိ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆(စ) အရ ရှမ်းပြည် နယ်ရှိ.ဟိုပန်မြို့နယ်၊ မိုင်းမောမြို့နယ်ပန် ၀ိုင် မြို့နယ်၊ နားဖန်းမြို့နယ်မက်မန်း မြို့ နယ်နှင့် ပန်ဆန်း (ပန်းခမ်း)မြို့ နယ် စုစုပေါင်း ခြောက်မြို့နယ် တို့ကို.ခရိုင် (၂) ခရိုင် ခွဲပြီး ၀ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်….
မြေပြင် မှာတော့ ၀ ဒေသဟာ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် .မြောက်ပိုင်း နယ်မြေ ပန် ဆန်းဒေသ နှင့်မြန်မာ- ထိုင်း နယ်စပ် တောင် ပိုင်း နယ်မြေ မိုင်းတုံ၊ မိုင်း ဆတ် ဒေသဆိုပြီး နှစ်ပိုင်း ခွဲထားတဲ့ ဒေသ နှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ….
မြောက်ပိုင်း ဒေသကို ဦးပေါက် ယူချန်းမှ ခေါင်းဆောင်ပြီး တောင်ပိုင်း ဒေသကို ဦးဝေရွှယ် ခန်းမှ ခေါင်း ဆောင်ပါတယ်မြောက်ပိုင်း ဒေသက ၀ လူမျိုး ၇၀ ရာခိုင်နူန်းဟာ တရုတ်ဘာသာ စကားပြောဆိုပြီးတရုတ် ယွမ်ငွေ ကို သုံးစွဲပါတယ် ....
ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ရဲ့ ခေတ်သစ် ကွန်မြူနစ် သမိုင်းကတော့ ၁၉၆၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့ မှာစတင်ပါ တယ်အင်အား ၃၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ဗကပ တပ်ရင်း ကြီး ၃၀၃ ဟာ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ရဲ့အကူ အ ညီနဲ့ နယ်စပ် ကို ဖြတ်ကျော်ပြီးမြူခိုးတွေ အုံဆိုင်းနေတဲ့မုံးကိုးရွာငယ်လေး ကမြန် မာ့ တပ်မတော် တပ်ခွဲ တစ်ခွဲကို ၀င် တိုက်ပြီး ဗကပ အရှေ့ မြောက် စစ်ဒေသကိုစတင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ် …
ဖေဖော် ၀ါရီလ အတွင်းမှာပဲ တစ်ဖက် နိူင်ငံက စစ်ရေးအကူ အညီတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ထပ်မံရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၆၈ ခုနှစ် တစ်ခုတည်း မှာပဲ ဖောင်း ဆိုင်ပန် ဆု ထန် ဖော်ကျုံး ၊ ကြူကုတ်(ပန်ဆိုင်း)ကောင်းလုံ ၊ လုံထန်နှင့် နမ့်ပေါ် တပ်မ တော် စခန်းတွေကို ဆက်လက် အတိုက်ခံ ရပါတယ်
၁၉၆၈ နှစ် အကုန်ပိုင်း မှာကျေး လက်ကို အခြေခံ မြို့ ကိုဝိုင်း တိုင်းရင်း သား လူမျိုးစုတွေ ကို စုစည်း အမာခံ နယ်မြေတွေ တည်ဆောက် ဆိုတဲ့ဗကပ စစ် မဟာ ဗျူဟာတွေ အရ အရှေ့ မြောက်ဒေသ က ၀ တိုင်းရင်း သား တွေဟာ ဗကပ တပ် ရင်းကြီး ၄၀၄ ရဲ့လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၅၀၁ ၊ ၅၀၂ ၊ ၅၀၃ တပ်ရင်းတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့ စည်းခြင်း ခံရပါတော့တယ်…
ဒီတပ်ရင်းကြီး ၄၀၄ ရဲ့ခေါင်းဆောင် ပိုင်းဟာ မုံးကိုး ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဖုန်ကြားရှင် နဲ့ ကိုး ကန့် လူမျိုး များ ဖြစ်ကြပြီး အောက်ခြေ တပ် သားတွေ ကတော့ ၀ တိုင်းရင်း သား လူမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် အရောက် မှာတော့ …ဒီတပ်ဖွဲ့ တွေဟာ အင်အား ၄၀၀၀ ခန့် အထိ ရှိလာပြီး ကွမ်းလုံကို စ တင်ခြိမ်းခြောက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ် ….
၁၉၇၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း မှာ ဖုန်ကြားရှင် ကိုယ်တိုင် တပ်မဟာ မှူး အဖြစ်ပါ ၀င်တဲ့ အရှေ့ မြောက် စစ်ဒေသ တပ်ဖွဲ့တွေ ဟာအင်အား ၄၀၀၀ နီးပါးနဲ့ ချီတက် လာပြီး ကွမ်းလုံမြို့ မြောက် ဘက် ၇မိုင်အကွာ တာမြင်ရှန် တောင် ထိပ်မှာ တပ်စွဲ ထားတဲ့ လော်စစ် ဟန် ရဲ့ အင်အား ၈၀ လောက်ရှိ တဲ့ ကိုးကန့် ကာ ကွယ်ရေး ပြည်သူ့ စစ်စခန်းကို တိုက်ခိုက်ပြီး ကွမ်းလုံ ဒေသ တိုက်ပွဲစဉ် များကို စတင်လိုက်ပါတယ်…
ကွမ်းလုံ တိုက်ပွဲ စဉ်များ ဟာရက်ပေါင်း ၄၀ နီးပါး ကြာမြင့် ခဲ့ပြီး ဗကပ ဘက်က တပ်ရင်းကြီး အမှတ် ၄၀၄ လက် အောက် ခံ တပ်တွေ နဲ့ တပ်မတော် ဘက်က အမှတ် ၇၇ ခြေမြန် တပ်မ လက်အောက်ခံ တပ်တွေ အပြင်း အထန် တိုက် ခိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ….
နှစ်ဖက် စလုံးမှာ စစ်သည် ထောင် နဲ့ ချီ ပါဝင်တိုက် ခိုက်ခဲ့ ကြပြီး တပ်မတော် ဘက်ကတော့ လော်စစ်ဟန် ခေါင်း ဆောင်တဲ့ ကိုးကန့် ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့အင် အား ၈၀၀ ခန့် ကပါဝင် တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ ပါတယ်….
ကွမ်းလုံ တိုက်ပွဲ စဉ်များမှာ အထိ နာ သွား တဲ့ ဗကပ ဟာ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ ခြူးရွှေ ၊ ပန်ကောက် တိုက်ပွဲ ၁၉၇၈ ခုနှစ် မှာ နောင်လိုင် ၊ ပါဖန် တိုက်ပွဲ နဲ့ ၁၉၈၆ ခုနှစ် မှာ စီစီ ၀န် တာပန် တိုက်ပွဲ တွေ ကို ဆက် လက် ဆင်နွဲ ခဲ့ ပါတယ်…
အဲဒီတိုက်ပွဲ တွေ အပြီး မှာ တပ်မတော် က ဗကပ ခြေကုပ် စခန်းကြီး တွေ ဖြစ်တဲ့ကြူကုတ် ၊ ပန်ဆိုင်း ၊ ကွန်ဟိုင်း နောင်မ၊ မာန်ဟီးရိုး စခန်းတွေ ကို တန်ပြန် ထိုးစစ်ဆင် သိမ်းပိုက် ခဲ့ လို့ ခေတ္တ တန့် သွားခဲ့ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် တစ်ခါ ၁၉၈၈ ခု စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် မှာဗကပ ပန်ဆန်း ဗဟို ရဲ့ တိုက်ရိုက် ကွပ်ကဲမှု နဲ့ချီတက် လာတဲ့ဗကပ လက်ရွေးစင် တပ်ရင်း ၁၃ ရင်း ဟာ မိုင်းယန်း ဒေသမှာတပ်စွဲ ထားတဲ့ တစ်ခု တည်းသော တပ်မတော် ခြေလျင် တပ်ရင်း တစ်ရင်း ကိုထပ်မံ တိုက်ခိုက် ကြ ပြန်ပါတယ်။
နယ်မြေ တွင်းက စစ်ကူ စစ်ကြောင်း တွေ မလာနိူင် အောင်အဖက်ဖက် က ပိတ်ဆို့ ဖြတ်တောက် ပြီးမှ အပိုင် တိုက် ခိုက် ခဲ့တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ဒီတိုက်ပွဲ ဟာ တိုက်ပွဲ ကြီး ၁၄ ကြိမ် တိုက်ပွဲငယ် ၂၃ ကြိမ် အနီးကပ် လှံစွပ်ထိုး တိုက် ပွဲ အကြိမ် ၃၀ ထိ တိုက်ခိုက် ခဲ့ပေ မယ့် အဲဒီ တပ်မတော် ခြေလျင် တပ်ရင်း ဟာ စစ်ကူ စစ်ကြောင်း တွေ ကို စောင့် ဆိုင်း ရင်း (၈) ရက် လုံးလုံး မဆုတ်ခွာ ပဲ အသေခံ ခုခံ နေတာ ကြောင့် ဗကပ တို့ ရဲ့ မိုင်းယန်း ကနေ မူဆယ် နမ့်ခမ်း ကြူကုတ် ထိ သိမ်းပိုက် မယ့် စစ်ရေး စီမံချက် ဟာ သဲထဲ ရေသွန် ဖြစ်ခဲ့ ရပါ တယ် …..။
ဒီ တပ်မတော် နဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်စဉ် တွေမှာ အထိအခိုက် အကျ အဆုံး များပြီး အသုံးချ ခံ နေရတယ်လို့ မကျေမနပ် ဖြစ်လာ ကြတဲ့ဗကပ တပ်ရင်းကြီး ၄၀၄ လက်အောက် ခံ ၀လူမျိုး တပ်ရင်းတွေ ဟာ ၁၉၈၉ ဧ ပြီ ၁၇ ရက်နေ့ မှာ ဗကပ ပန်ဆိုင်း ဗဟိုကို ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်ပြီး ဗကပ ကို တော်လှန် တပ်မတော် အစိုးရနဲ့အပစ် အ ခတ်ရပ်စဲ လိုက်တဲ့ အတွက် ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ မြောက်ဒေသမှာ လက်ရှိ ၀ အထူးဒေသ ၂အနေ နဲ့ စတင်ပေါ် ပေါက် လာပါတော့တယ်……။။
( ရေးသားသူ - ရဲမိုး )
( အပိုင်း ၂ နောက်ရက် ဆက်တင်ပါမည် )
ꨟူမ်ꨳꨅူမ်းꨟပ်ꨵတွꨓ်ꨳ ꨀူꨓ်းမိူင်းတꨯးꨟဝ်း ꨁဝ်ꨳꨟူမ်ꨳပꨤင်ꨲပွꨯး ပီꨶꨀွꨓ်းꨁမ်း ဝꨤꨓ်ꨳꨟꨯးꨟဝ်းယူꨲꨁုꨳ
12:18 PMShan State Army
မ်ꨮꨲသုင် ပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်း ꨕူꨳꨟꨀ်ꨵꨅိူဝ်ꨵꨁိူဝ်းတꨯး ꨟꨀ်ꨵꨀူꨓ်းသိုꨀ်းꨟဝ်းꨁဝ်တꨤင်းသꨱင်ꨁုꨳ ꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵ
ꨁုꨳꨟဝ်း ꨅꨤꨯးလွတ်ꨳလꨰဝ်း မွꨀ်ꨲထိုင် ပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်း ꨀူꨳမိူင်းမိူင်း ꨀူꨳတီꨳတီꨳ ꨀူꨓ်းမိူင်းꨟꨀ်ꨵꨁိူဝ်းꨟꨀ်ꨵꨅꨤတ်ꨳ
ꨟꨀ်ꨵမိူင်း ꨟꨀ်ꨵသိုꨀ်း ꨟဝ်းꨁဝ်တꨤင်းသꨱင်ꨁုꨳ။ ပီꨶꨓꨯꨵ လိူꨓ်ꨳꨓꨯꨵ မီး ပီꨶꨀွꨓ်းꨁမ်း တပ်ꨵသိုꨀ်းꨅိုင်ꨳတꨯး ꨟဝ်း
ငဝ်ꨳမူꨓ်းပုꨲတီ မ်ꨮꨲသုင်ꨅိုင်ꨳတꨯးꨟဝ်း ꨬလꨳ ꨁုꨳꨟဝ်းꨁဝ် ꨟူမ်ꨳꨅူမ်းꨟပ်ꨵတွꨓ်ꨳပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်းꨀူꨳမိူင်းမိူင်း
ꨀူꨳတီꨳတီꨳ ꨁꨰꨓ်းတေုꨳ ပေုꨳꨬမꨳ ပီꨳꨓွင်ꨵ တꨯးꨟဝ်းꨁဝ် မုးꨁဝ်ꨳꨟူမ်ꨳꨅွမ်း သေꨀမ်းꨁုꨳ။ မ်ꨮꨲသုင်ꨁုꨳ ꨵ ꨵ
ဝꨤꨓ်းထီꨵ - 22 တေုꨳထိုင် 25 ။ လိူꨓ် Apirl / 2014
တီꨳꨡွင်ꨳ - SSPP/SSA ဝꨤꨓ်ꨳꨟꨯး
တီꨳꨀပ်းသိုပ်ꨲ - ꨀပ်းသိုပ်ꨲတီꨳ လူမ်းꨀပ်းသꨤꨓ် တီꨳဝꨱင်းꨕ်ꨮဝꨱင်းမꨓ်း ꨅွမ်းꨓင်ꨁုꨳꨟဝ်း ပိုတ်ꨲဝꨯꨵလူမ်း။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး သုံးသပ်ချက် အပိုင်း - ၁
9:23 AMPOLITICALSCIENCE No comments
ကျွန်တော်တို. မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်မတန်မှ လူမျိုးများသည် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ.အစည်းလဲအများ
ကြီးရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်အားတောင်.တင်းပြီး လက်နက်ခဲ.ယမ်း ကောင်းတာဆိုတာ
Burma Government ပဲရှိတာပါခ။လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ် နေတဲ. အဖွဲ.အစည်းလဲ န.အ.ဖ
Repulic တွေပဲ အုပ်ချုပ်နေတာ ဒါပေမဲ. တိုင်းရင်းသား (National Race ) တွေနဲ. ပြည်တွင်းစစ်
Public War ဖြစ်လာတာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်သွားပါပြီ ဘယ်ဖက်က နိုင်သလဲ ဘယ်ဖက်ကရှူံး
တာလဲလို.ကြည်.လိုက်ရင် ဘယ်သူမှ မနိုင် ဘယ်သူမှ မရှူံးဘူး ရှူံးသွားတာ ဘာလဲလို. သေချာ
ကြည်.ရင် ပြည်သူလူထု မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပစ္စည်း တွေပဲ ဆုံးရှူံး သွားတာပါပဲ။အခုကော် တကယ်
Peace ဖြစ်နေပြီလားလို. မေးလာရင် တိုင်းရင်းသားအနေနဲ.ဖြေရမှာ အားတော.နာပါတယ် No
Peace and No Home ပဲ အစိုးရ Cease fire and Truce လုပ်ဆောင်တဲ.နေရာမှာ ပြန်လဲ သုံး
သပ်ကြည်.မယ်ဆိုရင် ဘာမှ ထူးခြားလာတာမပာုတ်ပါဘူး။တိုင်းရင်းသားတွေကိုဘာများလုပ်
ဆောင်ပေးနေသလဲ တိုင်းရင်းသားတိုင်းအပေါ်ပဲ သူတို.၏ တပ်သား စားဝတ်နေရေးလဲ အခုထိပါ
ပဲ ဘာမှ လုပ်ဆောင်ပေးတာမရှိသေးပါဘူး ဒါနဲ.ပဲ မကြာခင်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ဖို. Nation
Wide Cease fire လုပ်ဖို.ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ.မလား။ Burma Govt: and Kachin They are Conflict for along time အဲဒါတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ တစ်ဖက်ကမီး တစ်ဖက်က လေ နဲ.
အစိုးရ က တိုင်းရင်းသားတွေကို လေပဲ အာလူးပဲ လာပေးပေးနေတယ် နောက်ကွယ်ရာမှာကြ
တော. မီးလို ပဲ လက်နက်ငယ် ကြီးတွေ ချကြတာ ဘယ်သူ.ဖက်မှာ မနစ်နာပါဘူး ကြားထဲက ပြ
ည်သူလူထုက ထိခိုက်နာတာပဲ အဖက်တင်တာပါ။တစ်ခုတော. ရှိပါတယ် တကယ်တမ်း အစိုးရ
တာ တစ်နိုင်ငံအပစ်ရပ်ရချင်တယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားနယ်မြှော ရှိနေတဲ. အစိုးရ တပ်တွေကို
ဆုပ်ပေးလိုက်ရင် သေချာပြီအဲဒါ ငြိမ်းချမ်းပြီ အခုပာာက မပာုတ်ပါဘူး President ဖက်ကတော.
Cease fire and truce လုပ်ဖို. ကမ်းလှမ်းလာခဲ.တယ်။ General မင်းအောင်လှိုင်ကြတော. အေ
ာက်ကနေ ထိုးစစ် လုပ်တယ် အဲဒါပာာ မဖြစ်သင်.တဲ. ကိစ္စပါ ပာိုတုန်းက ကျွန်တော်တို. RCSS/
SSArmy တွေက အများကြီး အစိုးရ ဦးသိန်းစိန် ဦးအောင်မင်းတို.အပေါ် အများကြီး သီးခံနား
လည်ပေးခဲ.ပါတယ်။ အောက်ခြေက မပြေလဲတာဘာတွေနဲ. သူတို.တွေကို နားလည်မူနဲ. သီးခံ
ပေးခဲ.ပါတယ် ဒါပေမဲ.တပ်တိုင်း တပ်တိုင်းပာာ အပေါ်က အမိန်း နေပြည်တော် (လေပြည်တော်)
နဲ.တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်နေတဲ. လို.ပြောနေမှတော. လုံးဝ ပဲ ကြာလာတော. ယုံကြည်မူဆိုတာ တ
ဖြေးဖြေးနဲ. လျှောကျသွားပါတယ် အဲဒါက ဘယ်သူလုပ်ဆောင်နေသလဲလို.မေးရင် ဗမာအစိုးရပဲ
လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ကချင်ကို ထိုးစစ်တာ ဒီသုံးနှစ် အတွင်းမှာ ဗမာအစိုးရဖက်က လူအင်အား
စစ်အင်အား ငါးထောင် ကျော်သေဆုံးသွားတယ်လို. ကြားသိရပါတယ်။ကချင်
တပ်မတော် KIA/KIO ကိုမတိုက်တုန်းက သူတို. ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း SSPP/SSA
Wan Hai ကိုတိုက်တုန်းကလဲ ထောင်ကဏန်း ရာဂဏန်းတွေပဲ။ အခုလဲ KIA/KIO Offensive
ထိုးစစ်တာလဲ ၃၅ % လောက်တော. ကချင်ပြည်ပေါ်ရောက်သွားပါပြီ။ ပာိုတုန်းက အစိုးရတို.၏
ထုတ်ပြန်ချင်သည် တိုင်းရင်းသား ကချင်တပ်မတော်ကို အစိုးရ အနေနဲ. Eradication တိုက်ပစ်
ဖို. ရည်မှန်းချက်မရှိပါဘူး ပြီးတော. ကချင်ကို ထိုးစစ် မလုပ်ရပါဘူးလို. အစိုးရ ပါးစပ် President
ပါးစပ် ကိုယ်တိုင်ပြောတာ အခုတော. သူတို.ဘာကိုငြင်းနိုင်အုံးမလဲ။ အစိုးရ တပ်မတော် န.အ.
ဖ ခေတ်ကတည်.က အခုချိန်ထိပဲ အစိုးရ က တစ်ဘူးဘူး နဲ. နိုင်ငံတကာဒါမက လူအများရှေ.မှာ
မကိုက်တတ်တဲ. ခွေးလိုလို မကုပ်တတ်တဲ. ကြောင်လိုလိုနဲ. မြန်မာနိုင်မှာ ဗမာအစိုးရထက် အာ
ဏာရှိတဲ.လူမရှိတော.ဘူး။ကျွန်တော်တို. မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတကာက လေးစားနေတဲ. လူပုဂိုလ်
လဲရှိပါတယ် ဒါပေမဲ. သူက နိုင်ငံတကာကိုပဲ ကမ္ဘာပတ်ပြီး Peace Noble award တော.ရခဲ.ပါ။
ဒါပေမဲ. တကယ်လက်တွေ.မှာ ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံပာာ လက်ရှိအခုထိပဲ ယိမ်း ငွေ.ကနေ မလွတ်
မြောက်နိုင်သေးပါဘူး။ အဲဆုကို ယူပြီး အိမ်မှာ လူအထင်ကြီးအောင် လူအများလေးစားအောင်
လုပ်နေတာပဲ အဖက်တင်တာ ကချင်အရေး ရှမ်းအရေး ဘာမှ ၀င်ကိုမပြောပေးဘူး။ သူတို.အခု
ချိန်ထိပဲ ကမ္ဘာာကိုပတ်လို. မ၀ သေးဘူး ကချင်ပြည်သူလူထုကြတော. အစာငတ် ထမင်းပာင်း
ငတ်။ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို.ကတော. တိုင်းရင်းသားအရေးကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ နံပါတ် ၁ ထား
စေချင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအရေးသည် ဗမာပြည်က အဓိက အရေးကြီးဆုံးအရာပဲ။
အပိုင်း - ၂ ဆက်လက် ဖတ်ရန် ။
A peaceful world without war, oraworld with war to keep the peace ?
11:29 PMPOLITICALSCIENCE No comments
Nowadays some governments have said that to keepapeaceful world "we vhave to make war". I ask you, what for? I'd like to know your point of view to find an easy and the best way to haveanice life and the most important thing be able to "think and live like real humans havingasatisfactory life".
I disagree with these kind of governments, but if we analyze it this issue may bealittle controversial. I'm sure most of people or everyone will say that the most correct way to keep peace is living with respect and tolerance andahigh level of education for everyone!
To finish this post I want to warn that it's only an article to discuss this situation, not to make controversial speech. Let's work forabetter world andabetter life... thank.
သိန်းနီ မြို. သည် စော်ဘွားများနေထိုင်ရာ ရှေးဟောင်း ရာဇ၀င် မြို. ဖြစ်ပါသည်
သိန်းနီ မြို. သည် စော်ဘွားများနေထိုင်ရာ ရှေးဟောင်း ရာဇ၀င် မြို. ဖြစ်ပါသည် ------
မဟုတ်တာ မကောင်းတာ လုပ်သောသူများသည် ကြာရှည် မမြဲ မနေရတတ်ပါ ------
ကံစပ် သိုက်စပ် ရှိမှသာ စီးပွားဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်ပါမည် -----
သိန်းနီ ကြာကန် တူးဖော် ချိန်တွင် စတေးခံရသော အမျိုးသမီး သည် ရှမ်း မ ဖြစ်ပြီး
ကလေး ကျောပိုးလွယ်လျှက် ရောက်လာချိန်တွင် သူမ ဧ။် ကလေးသည် နိူ.အလွန်ဆာကာ
ငိုကြွေးလျှက်ရှိသည် ---- စတေးမခံ ရမီ အချိန်တွင် ငိုယိုနေသော သားငယ်အား နိူ.တိုက်ချင်ပါသည် ဟု တောင်းပန်သော်ငြားလည်း ခွင်.မပြုသည်. အတွက်
ငါ.သား နိူ.ဆာ သလို သည်မြို. မှ နေထိုင်ကြသော လူသား အားလုံးလည်း ပိုက်ဆံ ချမ်းသာခဲ.ရင်လည်း တစ်ဝက်ပဲ ချမ်းသာကြပြီး တစ်ဝက်မှာ သူ.အလိုလို ပြန်ထွက် ပါစေ ဟု
ကျိမ်စာ ဆိုပြီး စတေး ခံခဲ.ကြောင်း သိရှိရပါသည် ----- သိန်းနီ ကြာကန် ရေခမ်း ချိန်သည်
မြို.နေ လူသား အားလုံး စီးပွားကျပ်တည်းကြပြီး ------
ရေပြည်. ရေစို နေမှ စီးပွားရေး ပြေလည် ချောင်လည် ကြကြောင်း ရာဇ၀င် ရှိခဲ.ပါသည် ------
ရေအစပြုရာ နေရာသည်လည်း ဘီလူးမ စောင်.ရှောက်သော ချောင်းမှ စီးဆင်းသဖြင်.
မြို.နေ ယောကျာ်း များသည် မိန်းမ များထက် သက်တမ်း ပိုတိုဂ်ျ သေကြကြာင်းကိုလည်း
လေ.လာ တွေ.ရှိရပါသည် !
နောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော. သိန်းနီမြို.ကို တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးသော လူများသည်
အကြောင်းအမျိူးမျိူးကြေင်. နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ရောက်လာကြရတာကိုလည်း အံ.သြဖွယ်
6:58 PMMYOPINION No comments
The life ofasoldier in the 1997's was difficult and for the thousands of young shan people who left home to fight for their cause, it was an experience none of them would ever forget. Military service meant many months away from home and loved ones, long hours of drill, often inadequate food or shelter, disease, and many days spent marching on hot, dusty roads or inadriving rainstorm burdened with everythingaman needed to beasoldier as well as baggage enough to make his life as
comfortable as possible. There were long stretches of boredom in camp interspersed with moments of sheer terror experienced on the battlefield. For these civilians turned soldiers, it was very difficult to get used to the rigors and demands of army life.
6:27 PMPOLITICALSCIENCE No comments
There seems to beagreat confusion what the word Democracy means. In spite of the fact that at least in some parts of the world one can hear it from the media every day.
Democracy by definition means the government by people. That means that all the people should be able to have their say in one way another in everything that affects their lives. Dictionaries usually say that this right can either be exercised directly (by every member ofacommunity having the possibility to enter personally, without mediators, his position onaparticular issue into the decision making process - modern technology is able to provide this possibility for increasingly larger and larger communities), or through representatives (members of legislative bodies). This second arrangement is then called Representative Democracy.
Representative democracy would be fine if the representatives would really make all their decisions only after consulting their constituencies. In the least, after havingaclear idea about the views of their constituents onaparticular issue, and trying to accommodate these views as best as possible (or postpone the decisions until an overwhelming majority of the constituents would be happy with them).
Unfortunately,avast majority of countries that call themselves Representative Democracies are not true democracies according to the above definition. Most of them are actually just Elected Dictatorships. People can vote usually only once every four or five years. They do not vote on any issues. They just elect their so called representatives who then until the next elections have no obligations by law and little incentives to base their decisions on individual issues on the wishes on their electorate. They hardly ever bother to consult them on their stands on various issues. Therefore, legislative bodies composed of such "representatives" act inavery dictatorial manner between the elections. The only country that is quite close to the definition of Democracy is Switzerland (more or less since 1291).
Any governmental system is fine if the people subject to this system are happy with it. Perhaps, in most of the above described "Elected Dictatorships," suchasystem of government is still the best one under the current circumstances.
What do you think? Are you happy with is? Isn't it time to do better? It all should depend on you, the citizens - which system you prefer. Are you willing to give some of your free time to be interested in public matters, and to participate in decision making?
We would like to hear from the politicians of the so called "Representative Democracies" how in their view their activities satisfy the definition of Democracy.
We would like to discuss the interesting question of the Leadership. What is the role of leaders inatrue Democracy?
We would like to contribute to the clarification of the meaning of the word Democracy.
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးမှန်ရင် ဗမာလူမျိုးကိုမုန်းရမယ်
5:13 AMPOLITICALSCIENCE No comments
ကျွန်တော်တို.တိုင်းရင်းသားတွေ လက်နက်ကိုင် ပြီးဗမာအစိုးရကိုတိုက်လာခဲ.တာ နှစ်ပေါင်း
၆၀ ကျော်လာပါပြီ။ စိတ်ရောလူရော အရှူံးပေးပြီလားလို.မေးရင် နိုး ပဲ နိုးပဲ ကျွန်တော်တို.တိုင်း
ရင်းသား ကျွန်တော်တို.အဖွဲ. ဗမာအစိုးရနဲ. Cease fire လုပ်တာ။လုပ်ချင်လို. လုပ်တာမပာုတ်
ပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်လာခဲ.တာ ရှမ်းပြည်လူထု ရှမ်းလူမျိုးနွယ်စုတွေ လက်နက်သံ
ယိမ်းငွေ. အနဲ. စစ်ပြေးဒဏ်ကို ခံခဲ.ရတာ အရမ်းကိုစိတ်မကောင်းလို. Cease fire လုပ်ခဲ.တာ။
ဒီချိန်မှာဗမာအစိုးရက လုပ်နေတဲ. Cease fire and democracy ပာာ ထိရောက်မယ်လို. လုံးဝ
မထင်ပါဘူး။ဘယ်နေရာမှာပဲကြည်.ကြည်. ဗမာအစိုးရက နေရာအပြည်.ပဲ။လွတ်တော်ထဲလဲဗမာ
အစိုးရက ၂၅ ရာခိုင်နူန်းကျော်လောက်က ထိုင်ထားပြီးပြီ။ ဗမာအစိုးရ ၏ Influenced ရှိနေသေး
တယ်လို.ပြောရမှာပဲ။အခုလဲ ကချင်ပြည်နဲ. ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် နေတိုင်းလိုလိုပါပဲ ကြိုးကြာလို
ပါပဲ။သေနတ်သံက နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်မှာ စစ်ဖြစ်လာတာ ဘယ်သူတွေရင်နာလဲ ကျွန်တော်
တို.ပဲ အစိုးရကိုအရမ်းကိုမုန်းသီးတယ်။ကျွန်တော်တို. မိသားစု ပျော်ရွင်မူလုံးဝ မရှိဘူး အဘိုးလဲ
ဗမာအစိုးရကသတ် အမျိုးတွေကလဲ သူပုန်ကို အဆက်အသွယ်လုပ်တယ်ဆိုပြီး သတ်ဖြတ် ဒါကို
ကြည်.ခြင်းအားဖြစ် မျက်စီ မျက်လုံးထဲက လုံးဝ ထုတ်ပြစ်လို.မရဘူး။အဲဒါကြောင်. တိုင်းရင်းသား
တိုင်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးမှန်ရင် ဗမာအစိုးရ ဗမာလူမျိုးကို မုန်းကြတယ် အဲထဲလဲကျွန်တော်ပါဝ
င်တယ် ပာိုတစ်ခါတုန်းက ရန်ကုန်မှာ ပညာလေ.လာဆည်းပူးတုန်းကလဲ ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်က
ပြောခဲ.ပါတယ်။တစ်ချို.လူကပြောတယ် အဲဒါမင်း အတ ပါတယ် ပာုတ်ပါတယ်။အဲဒါကျွန်တော်
အယူအဆ အဆွဲအလန်းပါ။ သူတို.မှ တိုင်းရင်းသားလိုမျိုး ကျွန်တော်တို.လိုမျိုးမှမခံစားရတာ။
စစ်ဖြစ်နေရာတိုင်း ပစ္စည်းပျောက် ကြက်ပျောက် ၀က်ပျောက် ဗမာအစိုးရ ၀င်လာပြီဆိုတာနဲ.ပဲ
ရှိရှိသမျှ အကုန်ပျောက်တော.တာပဲ တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်းပြီး လူများပစ္စည်းကိုလိုက်လု
ယူ။ ရန်ကုန်မှာ ကျွန်တော် ILBC မှာကျောင်းတက်တုန်းက ဗမာနဲ.တက်တော. မင်းကဗမာလူ
မျိုးကို အဲလောက်မုန်းနေရင် ဗမာပြည် ရန်ကုန်ကိုမနေနဲ.တဲ. ပာား ပာား လို.ကျွန်တော်ရစ်လိုက်
တယ် မင်းတို. စောက်ဗမာလူမျိုးတွေက ကိုယ်.ကိုကိုအထင်အရမ်းကြီးတယ်လို.။ မင်းတို. ဗမာ
ပြည် ရန်ကုန်မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို.ရှမ်းလူမျိုးနေတာ မှန်တယ် နေတဲ.လူဦးရေ Population
သိတယ် မင်းတို. ဗမာလူမျိုးတွေက ငါတို.ရှမ်းပြည်မှာနေတာ ရေတွက်လို.မရဘူးလို.။အဲလိုပြော
ကြေးဆိုရင် ရှမ်းပြည်မှာ ရှိတဲ.မင်းတို.ဗမာတွေကို အကုန်သတ်ပြစ်ပါ.လိုက်မယ်လို.။
Burma Government တိုင်းရင်းသားအစိုးရပြည်နယ်ထဲဝင်တိုင်း Rape and murder အမြဲတမ်း
ဖြစ်တယ် ဒါကိုကြည်.ခြင်းအားဖြစ် တိုင်းမှူးကိုတိုင် အားပေးတယ် တိုင်းရင်းသား/သူ ကိုတွေ.
တိုင်း မုဒိန်းကျင်.ဖို. တောင်အမိန်.ပေးလိုက်သေးတယ် ကယ်ကောင်းလိုက်သေးလား ဗမာလူမျိုး
ဗမာအစိုးရ ကို။ရန်ကုန်မှာ တက္ကသိုလ်လာတက်တုန်းက ဗမာမ ခပ်များများကိုကြည်.မိ.ပါတယ်။
ကောင်းတာလဲရှိတယ် ဆိုးတာလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ. ခပ်များများပေါ. အဲထဲမှာ ဒဂုံတက္ကသိုလ် တက်
တုန်းက ဗမာမလေးတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်.သူငယ်ချင်းက လာမိတ်ဆက်ပေးတယ် ခနခန
လဲ အဲဗမာမနဲ. ပေးစားတယ်။စိတ်မရှည်တော.ပြောထက်လိုက်တယ် အဲဗမာ ယူမယ်.အစား ခွေး
မယူရင်တောင် မှ ကိုယ်.အပေါ် သစ္စာရှိပြီး သယေဇဉ်ရှိနေအုံးမယ်လို.ပြောလိုက်တယ်။အသဲထိ
မက အရိုးထဲအထိနာတယ်လို.ပြောတာပဲ နာလဲ ပြီးရော သေသွားတာတောင်ပိုတောင်ကောင်း
သေးတယ် ဗမာဆိုတာ မရှိလေကောင်းလေပဲ ရှိရင်မကောင်းဘူး။ဗမာလူမျိုးမှန်ရင် လိမ်ညာတတ်
ရမယ်။ခွေးတောင် ကိုယ်.အပေါ်ဘယ်လောက်သစ္စာရှိသလဲလို.မမေးနဲ. သူ.သခင်ပြန်လာရင် အ
မြီးတစ်ကောက်ကောက်နဲ. ဗမာလူမျိုးက အဲလောက်ကတိတည်တယ်ဆိုတာမရှိပါ။ ရှင်းရှင်းပြော
တာဗမာလူမျိုးနဲ. ပတ်သက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရင် သူတို.က အယူပဲရှိချင်တာ အပေးမရှိဘူး။ဒီလိုရေး
တာ ကျွန်တော်ကဘာကိုဆိုလိုချင်သလဲလို.မေးရင် စောက်ဗမာလူမျိုးကိုမုန်းလို.ပေါ. မခင်ချင်ရင်
Block ပလိုက်စိတ်မဆိုးဘူး ကိုယ်.ခံစားချက်နဲ.ကိုရေးတာ။ကျွန်တော်မကဘူး တိုင်းရင်းသားတိုင်း
ပဲ ဗမာအစိုးရကို မုန်းတာ မယုံရင်မေးကြည်. ကချင်တို. ကရင် တို.ကိုမေးကြည်. ဗမာလူမျိုးတို.
ဗမာအစိုးရ တို.ကိုယုံကြည်လားလေးစားလား သစ္စာရှိသလားလို.မေးကြည်.လိုက် မေးတဲ.လူပဲ
၀မ်းနည်းမိ.မှာ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော. ဗမာအစိုးရသည် ဗမာလူမျိုးကနေ ပေါက်ဖွားလာတာပါ။
ကျွန်တော်တို. ရှမ်းလူမျိုးသည် ဗမာလိမ်ညာမူကိုခံခဲ.ရတာ ဒီတစ်ခါပဲမကဘူး ပင်လုံကနေစလာ
တာ အရမ်းအရမ်းကို မှားသွားတာ ပင်လုံစာချုပ်မှာ ချုပ်ဆိုခဲ.ကတည်းက မှားကိုမှား သွားတာ ပင်
လုံစာမချုပ်တုန်းကလဲ ကျွန်တော်တို. ရှမ်းစော်ဘွားတွေနဲ. ဗမာဘုရာတွေနဲ. ဘယ်တော.မှ မတဲ.
ကြဘူး အင်အားချင်ပြိုင်ကြတယ် အင်အားခြင်းယှဉ်ကြတယ်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာလဲ
ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ.ချိန်ကမှစတာ မသိတဲ.လူက မြန်မာသမိုင်းကိုလေ.လာတဲ.အခါမှာ တိုင်း
ရင်းသားတွေ နဲ. ဗမာပြည်တွေက တစ်ပြည်ထဲလို. ခပ်များများထင်ကြတယ် ဒါပာာမှားတယ် သ
မိုင်းမှန်ကိုမရေးကြဘူး။ ဗမာအစိုးရသည် အခုမပာုတ် အရှင်စောမွန်လှ ခေတ်ကတဲ.က ရှမ်းလူမျိုး
ကိုသတ်ဖြတ် နိမ်.ချ ကြတာ အခုထိပဲ။တစ်ချို.လူမျိုးတွေက ဗမာကောင် ဗမာမတွေယူယူကြတာ
အဲဒါက သူတို.ရှေ.ရေးအတွက် မစဉ်းစားလို. မွေးမွေးလာပေးတာ မအေ လဲမစဉ်းစားဘူး မသင်
ပေးဘူး လမ်းမညွန်ပြခဲ.ဘူး မညွန်ပြ မပြောပြရင်တောင်မှ ကိုယ်.အသိစိတ်နဲ.ကိုယ်သိရမယ် ဗမာ
လူမျိုးသည် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေကို ဗမာနယ်မြေ ဗမာပြည်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ ပာိုတုန်းက ရီစ
ရာတစ်ခုပြောလိုက်အုံးမယ် ဦးသိန်းစိန် ငပြောင်က စ၀်ရွက်ဆစ် ကိုပြောပါတယ် ဗမာပြည် မြန်မာ
ပြည်သည် ဗမာပဲပိုင်တာမပာုတ်ဘူးတဲ. တိုင်းရင်းသား မင်းတို.လဲ ပိုင်တယ်တဲ. ပီား ပီား ပိာီး ရီချင်
လိုက်တာ သူ.စကားက ခွေးလောက်တောင် တန်ဖိုးမရှိဘူး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ပိုင်တာ
ဝေးဝေးမကြည်.နဲ. RCSS/SSA AND SSPP/SSA တို.ဆိုရင် သူတို.ပိုင်တဲ.
နယ်မြေတွေက ဘယ်လောက်ရှိလို.လဲ လွယ်တိုင်းလျန်းတို. ၀မ်ပိာုင်းတို.ဆိုရင် မင်းတို.နေပြည်
တော် လေပြည်တော် လူမျိုးလောက်တောင်မကျယ်ဘူး အဲဒါကိုက တိုင်းရင်းသားတွေက မင်းတို.
ကိုဘယ်လိုယုံရမလဲ စ၀်ရွက်ဆစ်က မိုင်းတော. မိုင်းထား ကိုတောင်း တယ် ဒုကာကွယ်ရေးဦးစိုး
၀င်းကိုတိုင် လာတယ် ကျိုင်းတုံမှာ Cease Fire လုပ်တုန်းက ပေးမယ်လို. သူတို.ပြောတာ အခုထိ
ဘာတွေအကောင်အထည်ဖော်လို.လဲ ဘာမှ မဖော်ဘူး စောက်လေးကြီး မိုးကြီး စောက်ဗမာအစိုး
ရပဲ လေပဲပြောတတ်တာ အကောင်အထည်မရှိဘူး။တိုင်းရင်းသားတွေကို စီးပွားရေးပိုင်းနဲ. ဆွဲ
ဆောင်တယ် ကရင်တို. ကယားတို.တောင် နဲ.နဲ.သဘေားထားတောင်ကွဲလွဲချင်သေးတယ် ပာိုတု
န်းက ဒါပာာ အစိုးရ လုပ်ဆောင်တဲ.အလုပ်ပဲ အခုမက နောက်ခါလဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်း မ
ပေါင်းစည်းနိုင်အောင် သူတို.က လုပ်နေတယ်။ဒီ UNFC ကိုတော.စည်းလုံးအောင်ပေးဖွဲ.တယ်နိုင်
ငံရေးအရပဲ သူတို.ကစည်းလုံးနိုင်တာ တကယ်စစ်ဖြစ်လာရင် ဘယ်သူမှ မကူညီဘူး။ကချင်စစ်ဖြစ်
တုန်းက ဘယ်သူ သူတို.ကိုကူညီလို.လဲ ဘယ်သူမှ မကူညီဘူး။SSPP/SSA AND TNLA တွေပဲကူ
ညီကြတာ နယ်မြေချင်းနီးလို.ပေါ.။အစိုးရတောင်မပြောနဲ. ဗမာလူမျိုးလဲ ထိုနည်းပဲ လိမ်လိမ်ညာ
ညာ ခေတ်အဆက်ဆက်ပဲ ဗမာလူမျိုးသည် နာမည်ကောင်းဘယ်နားမှာရရှိခဲ.လို.လဲ။ဆင်ဖြူတော်
တောင် ၂၀၀၂ တုန်းက ယိုးဒယား ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားခိုးလာသေးတယ်လေ အဲဒါပြသာနာတက်
လိုက်သေးတယ် မှတ်မိ.ကြမှာပေါ.။အဲဒါကြောင်. တိုင်းရင်းသားလူမျိုးသည် ကိုယ်.လူမျိုးကိုသိမ်း
ထိန်းပါ လူများလူမျိုးကိုမသွားချစ်ပါနဲ. ငွေတွေကိုမကြည်.နဲ. ကျွန်တော်တို.ရှမ်းလူမျိုးတွေက ရှမ်း
မျိုးနွယ်တွေက ကျွန်တော်တို. ဘိုးဘွား ကတည်းက စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ. အေးအတူပူမျှအတူတူ
နေလာခဲ.ကြတာ ဘယ်သူမှ ဘယ်သူ.ကိုအနိုင်မကျင်.ဘူး Equality နဲ.နေနေလာကြတာ။ငွေမရှိ
ရင်နေပါစေ စားစရာမရှိရင်နေပါစေ ပဲပုတ်တစ်ခြမ်းနဲ. ကောက်ညှင်းဆန်စားရရင်ကျေနပ်ပြီ။လူမျာ
းလူမျိုးကိုအထင်မကြီးနဲ. အထင်လဲမသေးနဲ. ကိုယ်.ကိုယ်ကို သတိရှိရှိနေပါ။ ယောက်ကျာ်းဖြစ်ဖြစ်
မိန်းခလေးဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်အတွက်လက်နက်မကိုင်နိုင် နိုင်ငံရေး ပါတီ ပိုင်းမလုပ်ပေးနိုင်ရင်နေ
ပါစေ လူမျိုးနဲ. ဘာသာ သာသနာ ယဉ်ကျေးမူ ကိုချစ်ပြီးကိုယ်.လူမျိုးကိုပဲ ယူရင်တောင်မှ ကျွန်ေ
တ်ာတို.က ကျေနပ်ပါပြီ။နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ် လက်နက်ကိုင်ပြီး လက်တွေ ယိမ်းငွေ.တွေ စား
သွား ပျက်စီးသွားနေပါစေ ခြေထောက်လက် မျက်လုံး ကမ်းသွားနေပါစေ ကျွန်တော်တို. ရှမ်းလူ
မျိုး ကျွန်တော်တို.ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်း ချစ်ခင်တယ် အချင်းချင်းယူကြတယ်ဆိုရင်
ကြားရတာ မြင်ရရင်ကျေနပ်ပါပြီ။အားလုံးပဲ ကိုယ်.လူမျိုးကိုချစ်ပါ မိုင်ဆွန်ခ အမှားပါရင်ခွင်.လွတ်
ပါ အမုန်းတရားကြီးတယ် ဗမာလူမျိုးကိုဆဲလ်တယ်လို.မကျေနပ်ရင် မိမိကြိုက်သလို Comment
ပေးနိုင်ပါသည်။မခင်ချင်ရင် Block သွားပါ ဒါပေမဲ. ဘယ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ် သေကွဲခွဲခဲ.ကြတဲ.လူ
တိုင်းပာာ ရင်မနာတာမရှိပါဘူး ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်သမားတွေက ဗမာလူ
မျိုး ဗမာအစိုးရ ကို Offensive လုပ်တာ ဗမာပြည်မှာသွားသောင်းကျန်းတာ မလုပ်ခဲ.ပါဘူးမင်းတို.
ဗမာလူမျိုး မိသားစု သေခွဲကွဲ သွားအောင်လဲမလုပ်ပါဘူး။ငါတို.မြေ ငါတို.ရေ ငါတို.ပြည်နယ်မှာနေ
တာ ငါတို.မြေပေါ်လာနေပြီး ငါတို.ကိုဆရာလာလုပ်ပြီး အမြစ်ပြတ် Eradication လုပ်ပစ်ချင်တဲ.
ဗမာအစိုးရကိုတော. ကျွန်တော်တို.က ပြန်ပြီး ခုခံစစ်ပဲလုပ်တာပါ Resistance ပြန်ပြီးတော. ထိုး
စစ် Offensive မလုပ်ခဲ.ပါဘူး အဲထဲက ဗမာအစိုးရလဲ သေသွားတာရှိပါတယ် စိတ်တော.မကောင်
းပါဘူး သူတို.က ကိုယ်.ကိုအရင်လာတိုက်တော. ကိုယ်က ကိုယ်.ကိုပြန်ကာကွယ်ဖို.ပြန်ပစ်လိုက်
ဒါပေမဲ. တပ်တပ်ချင်းသေရင်တော. ရင်မနာပါဘူး စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်စလုံးသေ
ကျေတဲ.အမျိုးပါ ဒါပေမဲ. ပြည်သူလူထုကိုတော. ဒုက္ခမပေးပါနဲ. မုဒိန်းကျင်.မလုပ်ပါနဲ. သတိရှိရင်
တက်လာခဲ. SSPP/SSA AND RCSS/SSA တို.ရှိတဲ.ဖက်ကို ကြားထဲက ပြည်သူလူထုကိုမထိပါ
နဲ. ။ စောက်ဗမာ ဗမာလူမျိုး ကောင်းတာမရှိဘူး ဗမာအစိုးရ ရိုးသားတာမရှိ ရိုးသားတိုင်း ဗမာအစို
းရ ဗိုလ်လိုကျ ချင်တိုင်းပဲ။ ဗမာမရှိရင်ကောင်းမယ် . . . . . .
ဗမာလူမျိုး ကောင်းသည်မရှိ ဗမာလူမျိုး ရှိသည် မကောင်း
10:36 AMMYOPINION No comments
ကျွန်တော် ရင်တွင်းခံစားချင်နည်းနည်းရေးချင်ပါသည်။ဗမာအကြောင်း အကောင်းပြောတာ
ကျွန်တော်လုံးဝ မလေးစား မဂုဏ်ယူပါဘူး။ခပ်များများ ဗမာလူမျိုးသည် ကျွန်တော်တွေ.ဖူး
ကြုံဖူးခဲ.တော.သူသည် ကောင်းတယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။လူမျိုးက ရိုးသားတယ်
သဘောကောင်းတယ်ဆိုတာ သူတို.က အကောက် အညစ်တွေ ကြံစဉ်ဖို. ရှိနေပါပြီ။ကျွန်တော်
တစ်ခုလောက်ပြောချင်ပါတယ် ကိုယ်.သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ။
ကျွန်တော်ကသူ.နဲ.တွေ.တော. ဗမာအကြောင်းကောင်းတာပြောတာ သူလုံးဝမကြိုက်ဘူး အဲ
တုန်းက ကိုယ်ကမယုံပါဘူး ဗမာလူမျိုးမကောင်းဘူးဆိုတာ တကယ်လက်တွေ.ကိုကြည်.လိုက်
တော. ဗမာဆိုတာ တကယ်မကောင်းခဲ.တာပါ။ သူတို.ကိုယ်.ကိုယ်အသုံးချမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး
သူတို.ဖက်ပါအောင်လုပ်ပါမယ်။ပြီးမှ သူတို.လိုချင်တာ လုပ်ချင်တာ လုပ်ချတော.တာပေါ.။ဗမာ
အကြောင်းပြောရင်အခုဆို ကျွန်တော်လဲ ရင်နာပြီး စိတ်ပျက်လွန်းတဲ.လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ
ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော. ကိုယ်ကရှမ်း သူတို.က ဗမာလူမျိုး အမျိုးလုပ်ကြအောင်တဲ. လူတစ်ချို.
ကကျွန်တော်.ကိုလာပြောတယ်။ပာုတ်ပါပြီ လုပ်မယ်လို. လက်ခံလိုက်တယ် သူတို.နဲ. ပေါင်းပြီး
သွားလာလှုပ်ရှားတာ တစ်နှစ်လောက်တော. ကောင်းခဲ.ပါတယ် ကျန်တဲ.နှစ်တွေ ကျော်လွားလာ
ခဲ.တာ လေးငါးနှစ်ရှိနေပြီ ကိုယ်.ကို စိတ်ပျက်စ၇ာတွေ ပေးခဲ.တာ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီသင်ခန်း
စာပာာ ကိုယ်က ရိုးသားတော. လူတစ်ချို.ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ. လက်ခံလေးစားမိ.တာ ကိုယ်.
အမှားပါ။ဗမာတိုင်းခပ်များများပဲ ကောင်းတာမရှိဘူး လူများကိုညစ်ဖို. လူမျိုးကိုလိမ်ဖို. လူမျိုးပစ္စည်
း တို.ပဲ သူတို. အလကားလိုချင်တာ။ အဲတစ်ယောက်ပေါ.နော် နာမည်တော.မပြောတော.ပါဘူး။
မသိရင်တော. သူ.ကိုယ်သူ ဘာလိုလို ညာလိုလိုနဲ. လူမျိုး ဘ၀ လူများစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ခဲ.
တာပေါ.နော်။ပာုတ်ပါပြီ ထားလိုက်ပါ ဒါပေမဲ. သူတို.အကြောင်းသိရင် သိတဲ.အတိုင်းမထားပါနဲ.
အလုပ်တစ်ခုကိုပြတ်သားဖို.လိုနေပြီဆိုပြီး လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ဗမာအကြောင်းလာပြောရင်မခံ
နိုင်လောက်အောင် ခံနေရတဲ. တစ်ချိန်က ငွေရေး ကြေးရေး ကိစ္စပေါ.။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာပည
ာသင်လေ.လာဆည်းပူးနေတဲ.အချိန်မှာ လူတွေနဲ. ခပ်များများဆက်ခံမိ.ပါတယ်။ဒါပေမဲ. အခုချိန်
ထိပဲ ရန်ကုန်ကျောင်းတက် မန်းလေးမှာလဲ အလုပ်လုပ်ဖူးတယ် ဒီအချိန်ထိ ယိုးဒယားရောက်လာ
တဲ.အထိ ဗမာလူမျိုးဆိုတာ ကောင်းတာတစ်ယောက်မှ မရှိဘူး စေတနာမရှိဘူး လိမ်စား ညာစား
ဖို.ပဲ သိတယ်သူတို.က။ စစခင်တုန်းက စကားနူတ်ကချိုသလားမမေးနဲ. သားလေး သားလေးနဲ.
နောက်ဆုံး နောက်ဆုံးတော. ငါ.ကိုကြံဆီပြီး သတ်ဖို. ငါ.ဘ၀ မတိုးတက်ဖို. ခေါင်းမပေါ်နိုင်ဖို.နင်
လုပ်နေတာကို။ နင်တို.နဲ. ပေါင်း၇တာ စိတ်ပျက်ပါတယ်လူပျက် နာမည်ပျက်တယ်။ ဒါပေမဲ. ငါ
လူတွေကို(ဗမာလူမျိုးကို) အယုံလွယ်လို.ပါ မိဘက အတန်တန် သတိပေးတိုင်းလဲ ဗမာလူမျိုးမ
ကောင်းဘူးဆိုတာ သုံးပုံမှာ နှစ်ပုံပေါ. ငါတွေ.တဲ. ဗမာအသိမိတ်ဆွေပာာ သူကကောင်းတယ်လို.
ထင်ခဲ.မိ.တာ နောက်ဆုံး နှစ်ပုံထဲက လူလဲ သူပါသွားပါပြီ။ ကိုယ်.ဘ၀ ကိုတိုးတက်ဖို.ဆိုတာ ကို
ပဲ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရမှာပါ ဘယ်သူမှ မလုပ်ပေးပါဘူး။ဒါပေမဲ. ငါတကယ် အ ခဲ.တာပါ။နောက်ဆုံး
ငါအရမ်းအရမ်းနောက်တရပါတယ် ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ.အချိန် ငါဘယ်သူ.ကိုပြောချင်သလဲဆိုတာ
နင်သိမှာပါ။ ငါ.ဘ၀ မထ ခေါင်းမပေါ်နိုင်အောင်နင်လုပ်ခဲ.တာ နင်ဖြေရှင်းတဲ.အလုပ်က ရောသွား
တာ နဲ.ပါးသွားတာမရှိ တိုးတိုးလာတာပဲ နောက်ဆုံး ငါပဲပြန်ရှင်းရတာ ငါအကုန်မရေးချင်ပါဘူး။ငါ
အကုန်ရေး ဒီစာကိုဖတ်မိ.တဲ.လူတိုင်းပာာ ငါက ငအ ကောင်ဖြစ်နေလို.ပါ။အ တာတော.မပာုတ်ပါ
ဘူး ရိုးသားလို.ပါ အယုံကြည်လွယ်လို.ပါ။တစ်ခါပဲ ရမှာပါ နှစ်ခါတော.မရပါဘူး။နင်တို.စောက်ဗမာ
လူမျိုးသည် ဒီဘ၀ မက နောက်ဘ၀မျိုးလဲ ငါလုံးဝ မမေ.ပါဘူး။ငါ.အပေါ်ချိုးခဲ.တာတွေ။ကျွန်တော်
အမြင်ကို ကန်.ကွက်သူရှိသလို ထောက်ခံတဲ.လူဆိုတာ ရှိကြမှာပဲ။ လူတွေ အများ ဗမာတွေအမျာ
းနဲ. ပေါင်းကြည်.လိုက်ရတဲ.အခါမှာ သိမှာ ပါ။အရင်ဆုံး သူတို.နဲ.အတူတူ အလုပ်အတူတူလုပ်
ကြည်.ပါ အဲချိန်ကြရင်သိကြမှ ဗမာစောက်စိတ်ဓာတ်ပဲလောက်ထိ အောက်တန်းကျသလဲဆိုတာ
ကို။ ဒီဘ၀ မက နောက်ဘ၀လဲ ငါဗမာလူမျိုး ဘ၀မွေးဖွားလာခဲ.ရင် ငါ.ကိုငါပဲ သတ်သေလိုကမယ်
ဘယ်တော.မှ အခဲမကျေဘူး နင်တို. ငါ.အပေါ်ချိုးခဲ.တာတွေ။စောက်ဗမာ ဗမာခွေးမျိုး(အကုန်မ
ဆိုလို . . . . . . . ) ဗမာကောင်းမရှိ ဗမာရှိမကောင်းပဲ။
မနက်တိုင်း ဇနီးကို နမ်းသော အမျိုးသားများ သာမန် အမျိုးသားထက် ငါးနှစ် အသက်ပိုရှည်
8:27 AMHEALTH No comments
ဂျာမနီ နိုင်ငံမှ ဆရာနဲ့ စိတ်ပညာရှင်တို့ ပူးပေါင်းလို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ထားတဲ့ လေ့လာချက် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း လေ့လာချက် အရ မနက်တိုင်း ချစ်သူ ဇနီးမယားကို အနမ်းပေးလေ့ ရှိတဲ့ အမျိုးသားက သာမန် အမျိုးသားများထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အသက် ၅ နှစ် ပိုရှည်ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
မနက်တိုင်း ဇနီးဖြစ်သူကို အနမ်းပေးခြင်းက နွေးထွေးမှုနဲ့ အခြားသော အဓိပ္ပါယ် များစွာ ပါဝင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဇီဝ ဖြစ်စဉ် ပြောင်း လဲမှု၊ သွေးလည် ပတ် မှုတို့ကို အားကောင်း စေပါတယ်။ သာမန် လူတစ်ယောက် မနက်နိုးပြီး အပြင်သွားချိန် အကြောင်း အမျိုး မျိုးကြောင့် ဒေါသ ထွက်လွယ်တာမျိုး၊ နှလုံး သာမန်ထက် ခုန်တာ မျိုးကို လည်း မနက်တိုင်း အနမ်းပေးတဲ့ အမျိုးသားတို့က မကြုံတွေ့ရ ပါဘူး။ Heart attack ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပြီး စိတ်ဖိစီးမှု၊ ပူပင်သောကတွေကိုလည်း ကျဆင်း စေကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဂျာမနီက အမျိုးသားတွေမှာ စစ်တမ်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ တွက်လိုက်ရင် သာမန်လူတွေထက် မနက်တိုင်း ရုံးမသွားမှီ ဇနီးသည်ကို အနမ်းပေးလေ့ ရှိတဲ့ အမျိုးသားများက အသက် ၅ နှစ် ပိုရှည်ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၍ ၂၀၆ ပေါင် ခန္ဓာကိုယ်မှ ၈၉ ပေါင်သို့ ကျဆင်းသွားသူ
11:58 PMHEALTH No comments
ခန္ဒာကိုယ်မှာ မလိုအပ်တဲ့ အဆီတွေနဲ့ ဝနေသော အမျိုးသမီးကြီးဟာ လေ့ကျင့်ခန်းများကို နေ့စဉ်မှန်မှန် လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် ၂၀၆ ပေါင် ခန္ဓာကိုယ်မှ ၈၉ ပေါင်ထိအောင် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွား
တယ်လို့ သိရပါတယ်။ထိုအမျိုးသမီးသည် အစားများကို လျော့စားသည့် အတွက်ကြောင့်
ကျဆင်းသွားခြင်း မဟုတ်ဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်အောင် လုပ်ခြင်းကြောင့်ယခုလို ကျဆင်းသွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားများ စားသုံးမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး အဆီကျစေမည့် အသီးအရွက်များကို မှီဝဲတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပိန်သွယ်သော ခန္ဓာကိုယ်ကို လိုချင်ကြသူတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းကိုပုံမှန်လုပ်ချင်းအားဖြင့် လုပ်နိုင်ပါကြောင်း သူမက ဆိုပါတယ်။
11:34 PMHEALTH No comments
ချွေးထွက်လွန်ပြီး ကိုယ်နံ့နံတဲ့အခါ မိမိကိုယ်တိုင်သာမက ဘေးပတ်ဝန်းကျင် က လူတွေပါ သင့်ကိုယ်နံ့ကြောင့် စိတ်မသက်သာ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်နံ့ ဟာ အစားအသောက်စားသောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲတာနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးကို ထိန်းသိမ်းတဲ့နည်းနဲ့ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ချွေးထွက်များခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အချက်များ
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ချွေးအသင့်အတင့်ထွက်ဖို့ လိုအပ်ပေမဲ့ ချွေးထွက်များတာ ကြောင့် ကိုယ်နံ့နံတာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ချွေးထွက်များတာကို Hyperhidrosis လို့ခေါ်ပြီး အောက်ပါအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါ တယ်။
- မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပုံစံ၊
- တချို့သော ဆေးဝါးကုသမှု၊
- အမျိုးသားဟော်မုန်း(တက်စတိုစတီရုန်း) လျော့နည်းခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊
- သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလုပ်လုပ်လွန်းခြင်း၊
- ငှက်ဖျားရောဂါ၊ တီဘီရောဂါ၊
- ကင်ဆာအကျိတ် Lymphoma၊
- စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ပူပင်သောက များခြင်း၊
ကိုယ်နံ့နံခြင်း ဖြစ်ရသော အကြောင်းများ
ချွေးထွက်များတာနဲ့အတူ ကိုယ်နံ့ပြင်းပြင်းနံတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်နံ့နံတာက ချိုင်း၊ ပေါင်ခြံစတဲ့ နေရာတွေမျာ ချွေးထွက်များတာကြောင့် ဖြစ်တတ်သလို အောက်ပါ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
-တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး မကောင်းခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ အသည်း တွင် ဖန်းဂတ်စ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါကြောင့် Acetone အနံ့နံခြင်း၊ အရက် သောက်ခြင်း၊ စီးကရက်သောက်ခြင်း၊ ချွေးထွက်များတာကြောင့် ချွေးနဲ့အစို ဓာတ်ထဲမှာ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကြောင့် ကိုယ်နံ့ နံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နံ့နံ့စေသော အစားအသောက်များ
ကိုယ်နံ့နံစေတဲ့ အစားအသောက်တွေက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
- အနီရောင်အသား အစားများခြင်း၊ - အမျှင်ဓာတ်နည်းပြီး သကြား၊ တိရစ္ဆာန်ဆီ၊ အခွံချွတ်ထားတဲ့ ကောက်နှံစတဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ အစာတွေကိ်ု များများစားခြင်း၊ လေ့လာမှုအရ အပင်ထွက်အစားအသာက်တွေက ကိုယ်တွင်းစနစ်တွေကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်နံ့ကောင်းစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အပင်ထွက်အစာတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ကလိုရိုဖီးလ်နဲ့ တခြားအာဟာရဓာတ်တွေက ကိုယ်တွင်းစနစ်အားလုံးရဲ့ မသန့်စင်မှုတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့ပါ။ တရုတ်နံနံ၊ မုန်လာဥနီ၊ ကျောက်ဖရုံသီးစတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက ကိုယ်နံ့နံတာကို လျော့ပါးစေ တယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဆိုပါတယ်။
ကုန်းဘောင်မင်းဆက်၏ နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်သော သီပေါမင်း၏ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်နှင့် မိဖုရားများ၊ သားတော် သမီးတော် မြေးတော်များအကြောင်း ဖော်ပြချက်အကျဉ်း ....
(၁) ဖခင် မင်းတုန်းမင်းသည် တတိယနိုင်ငံတည် အလောင်းမင်းတရားကြီးမှ တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာသော မင်းမျိုးဖြစ်သည်။ အလောင်းမင်းတရား+ (မိဖုရားခေါင်ကြီး) ခင်ယွန်းစံ (တို့၏သားတော်) - ဗဒုံမင်း + (မြောက်နန်းမိဖုရား-၁) ဒေါ်လွန်းသူ (တို့၏သားတော်) - အိမ်ရှေ့မင်းသား ဦးပေါ် + (ဗဒုံမင်း၏ မိဖုရားခေါင်ကြီး ဒေါ်လွန်းမယ် မှ မွေးဖွားသော) မိဖုရား ဒေါ်ကေ (တို့၏သားတော်) - သာယာဝတီမင်း + (ပုဂံမြို့သူကြီးသမီး) ပဒေသာတိုက်စား မိဖုရား (ကျောက်မော်မြို့စား) တို့မှ ၅-၇-၁၈၁၄ နေ့တွင် မင်းတုန်းမင်းအား မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁-၁၀-၁၈၇၈ နေ့ အသက်(၆၄)နှစ် အရွယ်တွင် နတ်ရွာစံသည်။ မင်းတုန်းမင်း (ဦးလွင်)တွင် မိတူဖတူ မွေးချင်းအရင်းအဖြစ် ညီတော် အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသား (ဦးကောက်) တစ်ဦးတည်းသာ ရှိသည်။ ကနောင်မင်းသားမှာ ၅-၉-၁၈၁၉ နေ့တွင် မွေးဖွားပြီး ၂-၈-၁၈၆၆ နေ့ မြင်ကွန်းမြင်းခုံတိုင် ပုန်ကန်မှု အရေးတွင် သေဆုံးခဲ့သည်။
(၂) သီပေါမင်း၏ မိခင်မှာ (သီရိမဟာမင်္ဂလာသုပဘာဒေ၀ီဘွဲ့ခံ) လောင်းရှည်မြို့စား မိဖုရားဖြစ်သည်။ လောင်းရှည်မိဖုရား၏ ဖခင် ဦးမှေးမှာ ဗဒုံမင်း၏ သားတော် (အိမ်ရှေ့မင်းသား) ဦးပေါ် + မိဖုရား နန်းမွေးခန်း တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သောကြောင့် မင်းမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ ဦးမှေးသည် စစ်ကိုင်းမင်းလက်ထက်တွင် သတိုးမင်းရဲ ကျော်စွာဘွဲ့ဖြင့် ရမ္မာဝတီမြို့စားဖြစ်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲအပြီးတွင် သီပေါမြို့စား ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်တွင် ချွန်းတောင်မြို့စား မိုးနဲဗိုလ်မှူးအဖြစ် အမှုထမ်းရသည်။
လောင်းရှည်မိဖုရား၏ မိခင် မယ်အိ မှာ ဟံသာဝတီဆင်ကြားရှင်၏ အဆက်အနွယ်ဖြစ်သည်။ မြေဒူးမင်း ဇင်းမယ်ကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်သည့်အခါ ဇင်းမယ်သို့ ရောက်ရှိနေသော ဆင်ကြားရှင်သည် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ ဆင်ကြားရှင် ၏သမီး ရှင်အောင်လံ သည် စစ်သူကြီး ဒလပန်း၏ညီ ပုတ္တကျော်နှင့် စုံဖက်ရာမှ ရှင်ပုဇွန် ကိုမွေးဖွားသည်။ ရှင်ပုဇွန်သည် ညောင်ရမ်းမြို့စား စကြာဝန်ကြီး ဦးမြတ်ရာနှင့် လက်ဆက်ရာမှ လောင်းရှည်မိဖုရား၏ မိခင် မယ်အိကို မွေးဖွားသည်။ လောင်းရှည်မိဖုရားကို ဦးမှေး+မယ်အိ တို့မှ ၁၈၁၅ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားပြီး ၁၈၈၁ ခု၊ ဇွန်လတွင် မန္တလေးမြို့၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ မွေးချင်းများမှာ ခေါင်းတုံးမြို့စား ဦးဖိုးကြီးနှင့် မင်းဂါမဏိ တို့ဖြစ်ကြသည်။
(၁) (သုသီရိပဘာဝတီဘွဲ့ခံ) ချွန်းတောင်းမင်းသမီး (အချို့ဖော်ပြချက်တို့တွင် ချွန်းတောင်းမင်းသမီး မပါဝင်ပဲ သီပေါမင်း၏မွေးချင်းကို ၃-ဦးသာ ရေတွက်ပြသည်။)
(၂) (သုသီရိရတနာဒေ၀ီဘွဲ့ခံ) မိုင်းခိုင်းမင်းသမီး (ပခန်းကြီးစုဖုရား) - ၁၉၅၇ ခုတွင် မွေးဖွားသည်။ သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်တို့ ခန့်အပ်သော သီပေါစော်ဘွား စောခွန်ဆိုင်နှင့် စုံဖက်ခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့၊ ဆိုင်းတန်းရပ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး ၇-၃-၁၉၁၁ နေ့တွင် ကွယ်လွန်သည်။ (သာသမီး မထွန်းကားဟု ဆိုသည်။)
(၃) (သီရိမဟာဓမ္မရာဇာဘွဲ့ခံ) သီပေါမင်းသား - ၁-၁-၁၈၅၉ နေ့တွင် မွေးဖွားပြီး အမည်ရင်းမှာ ဦးမျိုးဆက် ဖြစ်သည်။ စာပေထူးချွန်၍ အနေအထိုင် အေးဆေးတည်ငြိမ်သည်။ အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ်တွင် ရှင်သာမဏေ ၀တ်ခဲ့ပြီး ပထမကျော်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၂-၁၀-၁၈၇၈ နေ့တွင် ရတနာပုံထီးနန်းအား ဆက်ခံခဲ့ပြီး နန်းစံသက် (၇)နှစ်ခန့်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို အပြီးတိုင်သိမ်းယူခဲ့သဖြင့် ၃၀-၁၁-၁၈၈၅ နေ့တွင် ထီးနန်းမှ ဆင်းခဲ့ရသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့သည် သီပေါမင်းနှင့် မိသားစုအား အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာ ၁၅-၁၂-၁၈၈၅ နေ့တွင် မဒရပ်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ မဒရပ်စံအိမ်တော်၌ (၁၅)နှစ်ခန့် နေထိုင်ခဲ့ပြီး ၁၃-၁၁-၁၉၁၀ နေ့တွင် ရတနာဂီရိသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။ ၁၂-၁၂-၁၉၁၆ နေ့တွင် ရတနာဂီရိစံအိမ်၌ နတ်ရွာစံခဲ့သည်။
(၄) (သီရိသုရုဇာဝတီဘွဲ့ခံ) ပြောင်းပြာမင်းသမီး (မိတ္ထီလာစုဖုရားလေး) - ၁၉-၅-၁၈၆၀ နေ့တွင် မွေးဖွားပြီး ဦးကျော်လိမ်းမောင်မောင် နှင့်စုံဖက်ကာ သမီးတစ်ဦးမွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁-၆-၁၈၉၆ နေ့တွင် ကွယ်လွန်သည်။
သီပေါမင်း၏ မိဖုရား(၃)ပါးလုံးမှာ မင်းတုန်းမင်းနှင့် အလယ်နန်းမိဖုရား ဆင်ဖြူမရှင်တို့မှ မွေးဖွားသော သမီးများသာ ဖြစ်ကြသည်။
(၁) (သီရိသုရတနာ မင်္ဂလာဒေ၀ီဘွဲ့ခံ) မိုင်းနောင်စုဖုရားကြီး - ၂၆-၂-၁၈၅၄ နေ့ တွင် မွေးဖွားသည်။ သီပေါမင်းပါတော်မူပြီးနောက် မိခင် ဆင်ဖြူမရှင် နှင့်အတူ ထားဝယ်မြို့သို့ လိုက်ပါနေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ၁၈၈၈ ခုတွင် မိခင်နှင့်အတူ သီပေါမင်းရှိရာ ရတနာဂီရိသို့ အပို့ခံရပြီး (၁)နှစ်ခန့်အကြာတွင် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့် ရခဲ့သည်။ ဆင်ဖြူမရှင်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ စမ်းချောင်းရပ်၊ ရှင်စောပုလမ်းတွင်ပင် သေသည် အထိ နေထိုင်ခဲ့ပြီး မိုင်းနောင် စုဖုရားကြီးမှာမူ သီလရှင်ဝတ်ကာ မင်းကွန်းချောင်တွင် တရားအားထုတ် နေခဲ့သည်။ ၂၅-၁၁-၁၈၉၈ နေ့ (၁၉၀၀-ပြည့်နှစ်ဟုလည်းဆိုသည်) တွင် သီလရှင်ဝတ်ဖြင့် ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။ (သားသမီးမထွန်းကားပေ)
(၂) (သီရိသုပသာရတနာဒေ၀ီဘွဲ့ခံ) မြတောင် စုဖုရားလတ် - ၁၃-၁၂-၁၈၅၉ နေ့ တွင် မွေးဖွားသည်။ ပါတော်မူစဉ် သီပေါမင်းနှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ရတနာဂီရီသို့ လိုက်ပါခဲ့ရပြီး သီပေါမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ချာချီလမ်း (ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းလမ်း) အမှတ်(၂၃) စံအိမ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ရာမှ ၂၄-၁၁-၁၉၂၅ နေ့တွင် ကွယ်လွန်သည်။ (သား ၁ ဦး သမီး ၆ ဦး မွေးဖွားခဲ့ပြီး သား ၁ ဦးနှင့် သမီး ၂ ဦးတို့ ငယ်စဉ်က ကွယ်လွန်သည်။)
(၃) ရမည်းသင်းစုဖုရားလေး - ၁၈၆၂ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားပြီး သီပေါမင်း ပါတော်မူခါနီး၌ မိဖုရားဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရတနာဂီရိ၌ သီပေါမင်းနှင့်အတူ လိုက်ပါနေထိုင်ရင်း ၂၅-၁-၁၉၁၂ နေ့တွင် ကွယ်လွန်သည်။ (သားသမီး မထွန်းကားပေ။)
သီပေါမင်းသည် ရတနာပုံထီးနန်းကို ဆက်ခံပြီးနောက် မကြာမီပင် ဆင်ဖြူမရှင်မိဖုရားကြီး ကြိုတင်စီစဉ် ထားသည့်အတိုင်း မိုင်းနောင် စုဖုရားကြီးကို မိဖုရားခေါင်ကြီးအရာထားလျက် မဟေသီဘိသေကသဘင် ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအခမ်းအနားသို့ သီပေါမင်း မင်းသား ဘ၀က ချစ်ကြိုက်ခဲ့သော မြတောင်စုဖုရားလတ် သည် မိမိသဘောအလျောက် ကြွချီလာခဲ့ပြီး ဘိသိက်ခံရာ ဘမရာသနပလ္လင် ထက်သို့တက်၍ သီပေါမင်းနှင့် စုဖုရားကြီး တို့အကြား ၀င်ထိုင်ကာ ဘိသိက်ခံယူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သီပေါမင်းသည် သမိုင်းတစ်လျောက် မိဖုရား ခေါင်ကြီး (၂)ပါးဖြင့် ဘိသိက်ခံယူခဲ့သော ပထမဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးမင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မိုင်းနောင် စုဖုရားကြီးသည် မိဖုရားခေါင်ကြီးအဖြစ် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ် သည့်အတွက် အဂ္ဂမဟေသီ မိဖုရားခေါင်ကြီးစံရာ နန်းမတော်ဆောင်တွင် နေထိုင်ရသည်။ မိဖုရားခေါင်ကြီး အဖြစ် ဘိသိက် ခံယူပြီးဖြစ်သည့် မြတောင် စုဖုရားလတ် မှာမူ နေစရာ အဆောင် မရှိသဖြင့် သီပေါမင်းစံရာ ဘမရာသန မှန်နန်းဆောင်သို့ တက်ရောက်နေ ထိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် စုဖုရားလတ်အတွက် မှန်နန်းဆောင်အနီးတွင် ရွှေဆောင်တော် အသစ်ကို အလျှင်အမြန် ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ရသည်။
ပဒေသရာဇ် မင်းဧကရာဇ်တို့မည်သည် တောင်ညာစံ အဂ္ဂမဟေသီ မိဖုရားခေါင်ကြီး (နန်းမတော်)၊ မြောက်နန်းမိဖုရား၊ အနောက်နန်းမိဖုရား၊ အလယ်နန်းမိဖုရား ဟူသော နန်းရ မိဖုရားကြီး(၄)ပါးနှင့် တောင်ဆောင်တော်၊ မြောက်ဆောင်တော်၊ တောင်ရွှေရေးဆောင်၊ မြောက်ရွှေရေးဆောင် ဟူသော အဆောင်ရ မိဖုရား (၄)ပါး စသည့် မိဖုရားကြီး(၈)ပါးကို ထားမြဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မြို့စားနယ်စား၊ စော်ဘွား၊ အခြားသော တိုင်းပြည် မင်းဧကရာဇ်တို့မှ ဆက်သလာသည့် သမီးကညာတို့အားလည်း မိဖုရား ကိုယ်လုပ်မောင်းမမိဿံ အဖြစ်ထားရှိ၍ မြို့စား ရွာစားအဆောင်အယောင်များ သင့်လျော်သလို ပေးကမ်းချီးမြှင့်ခြင်း ပြုမြဲ ဖြစ်သည်။
သို့သော် စုဖုရားလတ် အနေဖြင့် သီပေါမင်းအား မိဖုရားအများအပြား ထားခွင့်မပြုခဲ့သည့်အပြင် အစ်မရင်းဖြစ်သူ မိုင်းနောင်စုဖုရားကြီး ထံသို့ပင် ဆောင်တော်ကူးခွင့် မပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အပယ်ခံ မိဖုရားခေါင်ကြီးသဖွယ် ဖြစ်နေသော စုဖုရားကြီးလည်း နန်းမတော်ဆောင်ကို စွန့်ခွာ၍ မယ်တော် ဆင်ဖြူမရှင်၏ အဆောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကာ ရက်ရှည်ဥပုသ်စောင့်နေ ခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နန်းမတော်ဆောင် အား စုဖုရားလတ် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင် ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ (ဤအချက်ကြောင့် သီပေါမင်းသည် ဖော်ပြပါ မိဖုရား (၃)ပါးမှလွဲ၍ အခြားသော မိဖုရား ကိုယ်လုပ်မောင်းမ မရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေမည်။)
ထိုသို့ အရာရာချုပ်ကိုင်လိုသော မြတောင်စုဖုရားလတ်၏ သဘောကို မနှစ်သက်သော သီပေါမင်း၏ လက်သုံးတော် ငယ်ကျွန်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် (ဘုရင့်နောင်ဘွဲ့ခံ၊ မင်းသား အဆောင်ရ၊ ရနောင်မြို့စား၊ မြောက်ဒ၀ယ်ဗိုလ်) မောင်မောင်တုတ်၊ (စီးတော်မြင်းဝန်၊ ရွှေ တိုက်စိုး၊ တောင်သမန်လယ်စား၊ ဖိနပ်တော်ခေါင်း၊ ဘုရင့်စာဆိုတော်) မောင်ဖေငယ် (မောင်မောင်ဖေ) တို့သည် သီပေါမင်းအား မိဖုရားများရရှိအောင် ကြိုးပမ်း ပေးခဲ့ကြသည်။
မြတောင်စုဖုရားလတ်၏ ပထမသားတော် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဒုတိယသမီးတော် ကို မွေးဖွားပြီးစ အချိန်ခန့်တွင် သီပေါမင်းသည် ၎င်းနှစ်သက် သဘောကျနေသော ဒိုင်းအတွင်းဝန် ဦးဘိုးကြီး ၏သမီး (မွေးစား သမီး-တူမ) ဒိုင်းခင်ခင် (ခင်ခင်ကြီး) အား (မြောက်ရွှေရေးဆောင်မိဖုရား) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပင်းအတွင်းဝန် ဦးစံငြိမ်း ၏သမီး ပင်းခင်ခင်ကြီး အား (တောင်ရွှေရေးဆောင်မိဖုရား) အဖြစ်လည်းကောင်း မြှောက်စားရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ သီပေါမင်း၏ အကြံအစည်အား အချိန်မီ သိရှိခဲ့သော စုဖုရားလတ်သည် ရနောင်မြို့စား မောင်မောင်တုတ်၊ ၎င်း၏ညီ ပင်းသာမြို့စား မောင်မောင်ဗြောင်း၊ တောင် သမန်လယ်စား မောင်ဖေငယ်၊ ခန်းပတ်မင်းကြီး (ဒိုင်းဝန်၏ဖခင်)၊ ရေနံချောင်း မင်းကြီး၊ ရွှေမြို့တော်ဝန်၊ ပဌနဂိုရ်မြို့စား ၀န်ထောက်၊ မကွေးမြို့စား ၀န်ထောက်၊ ကောင်ဟန် ၀န် ခင်မောင်လတ်၊ ဒိုင်းအတွင်းဝန်နှင့် ၀န်ကတော်၊ သမီး ဒိုင်းခင်ခင်ကြီး စသည့် ပတ်သက်သမျှ လူအားလုံးအပြင် လက်သုံးတော်ကိုင်များ၊ ၀င်းမှူးများ၊ စာရေးစာချီများ၊ သံတော်ဆင့် များပါမကျန် အားလုံးကို ဥပါယ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက် ထီးနန်းစည်းစိမ်ကို ကြံစည်သည် ဟူသော စွဲချက်ဖြင့် ရာထူးမှထုတ်ပယ်၍ အကျဉ်းစီရင်သည်။ (ခန်းပတ်မင်းကြီးနှင့် ရေနံချောင်းမင်းကြီးတို့ကို ရာထူးချ၍ အကျဉ်းမှ ပြန်လွှတ်သည်။ ကျန်အကျဉ်းသားများမှာ သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီး အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်သော အချိန်ရောက်မှ လွတ်မြောက်ကြသည်။ )
သို့သော် ဒိုင်းအတွင်းဝန်၊ ၀န်ကတော်၊ သမီး ဒိုင်းခင်ခင်ကြီးတို့နှင့် တောင်သမန် လယ်စား မောင်ဖေငယ် တို့ကို သေဒဏ်စီရင်ခဲ့သည်။ (သေဒဏ်စီရင်ခံရစဉ်က ဒိုင်းခင်ခင်ကြီးတွင် သီပေါမင်းနှင့် ရသော ရင်သွေး ရှိနေကြောင်း သိရသည်။) သီပေါမင်း နန်းတက်စအချိန်က မင်းညီမင်းသားများကို လုပ်ကြံရာတွင် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သူ ရနောင်မြို့စား မောင်မောင်တုတ် မှာမူ ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်း ချမှတ်ခံ ရသော်လည်း ထောင်အတွင်းမှာပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခဲ့သည်။ (လုပ်ကြံခံရ၍ သေဆုံးသည် ဟုလည်း ဆိုသည်။)
ပင်းအတွင်းဝန်မှာ ရှေ့ရေးကိုကြိုတွေးမိ၍ ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ ပင်းခင်ခင်ကြီးအား မောင်မောင်ဖြူ ဟူသော အမျိုးကောင်းသားတစ်ဦးနှင့် အလျှင်အမြန် အိမ်ထောင်ချထား ပေးခဲ့သောကြောင့် ဒိုင်းခင်ခင်ကြီး အရေး ပေါ်ပေါက်ချိန်တွင် အပြစ်မဖြစ်တော့ပဲ ကင်းလွတ်ခဲ့ရသည်။
ထိုသို့ ဒိုင်းခင်ခင်ကြီး အရေးပေါ်ပေါက်ပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ မိဖုရားခေါင်ကြီး စုဖုရားလတ်သည် ၎င်း၏ ကိုယ်စား သီပေါမင်းအား အချိန်ပြည့် အနီးကပ်ပြုစု နိုင်ရန်အတွက် ညီမငယ် ရမည်းသင်းစုဖုရားလေး အား တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ရာမှ နောက်ပိုင်းတွင် သီပေါမင်း၏ တတိယမြောက် မိဖုရားဖြစ်လာသည်။
သီပေါမင်း၏ မိဖုရား (၃)ပါးမှ မြတောင် စုဖုရားလတ် တစ်ဦးတည်းကသာ သားသမီး မွေးဖွားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ပထမဆုံး မွေးဖွားသော သားတော် "ရွှေကိုယ်တော်လေး"၊ ဒုတိယနှင့် တတိယ မွေးဖွားသော "သမီတော်" နှစ်ပါး၊ ပေါင်း သားတော် သမီးတော်(၃)ပါးတို့သည် လသားအရွယ်ကတည်းက ကျောက်ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သောကြောင့် ထပ်မံမွေးဖွားသည့် သမီးတော်(၄)ပါးသာ ကျန်ရှိခဲ့သည်။
(၁) ထိပ်စုမြတ်ဘုရားကြီး - ၂၇-၁၀-၁၈၈၂ နေ့ မန္တလေးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ ပါတော်မူစဉ်က လေးနှစ် အရွယ်မျှသာရှိသေးသည်။ သီပေါမင်း ရတနာဂီရိ၌ စံနေရစဉ် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ခန့်အပ်ထားသော အိမ်တော် အခိုင်းအစေ များအား အုပ်ချုပ်ရသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား အိမ်တော်ခေါင်း ဂိုပယ်ဘာရိုးဆ၀န့် နှင့် စုံဖက်ခဲ့ရာမှ သမီး တုတု ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ (သီပေါမင်းနှင့် မိဖုရားတို့က မြေးငယ် တုတုအား အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသည်ဟု ဆိုသည်။) သီပေါမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက် မယ်တော်နှင့်အတူ ရန်ကုန်သို့ လိုက်ပါခဲ့ရသော်လည်း ခင်ပွန်း ဖြစ်သူရှိရာ ရတနာဂီရိသို့ ပြန်သွားခဲ့ပြီး ၃-၆-၁၉၄၇ နေ့တွင် ရတနာဂီရိ၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ (သမီး တုတု သည် ရတနာဂီရိမှ စက်ပြင်ဆရာ ရှန်ကာပါဝါ ဆိုသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီး ၇-ယောက် မွေးဖွား သည်။)
(၂) ထိပ်စုမြတ်ဖုရားလတ် - ၄-၁၀-၁၈၈၃ နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ နောင်တွင် သီပေါမင်းနှင့် မိသားစုအား ချစ်ခင်သောကြောင့် မန္တလေးမှ ရတနာဂီရိအထိ လိုက်ပါပြုစုနေသော အမြောက်ဝန် (တိုင်တား မင်းကြီး၏ သမီး ပတိမ်းသခင်၏သားဖြစ်သူ) ဦးခင်မောင် နှင့် ၀န်ကတော် (မင်းတုန်းမင်း၏ မြောက်နန်းမိဖုရား ခင်သဲ၏ မောင်အရင်း စီးတော်မြင်းဝန်၏သမီးဖြစ်သူ) မံသကြီးရွာစား ခင်ခင်ကြီး တို့၏ သားဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်လတ် (လတ်သခင်) နှင့် ၎င်းတို့ဆန္ဒအလျောက် စုံဖက်ခဲ့သည်။ စုဖုရားလတ်မှ သဘောမတူသဖြင့် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ အထောက်အပံ့ဖြင့် သီးခြားခွဲနေခဲ့သည်။ ထို့နောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ (တစ်ချို့-နီပေါနိုင်ငံ) ကလင်ပုံမြို့တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်အတူ နေထိုင်ရင်း ၄-၄-၁၉၅၆ နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ (သားသမီး မထွန်းကားပေ။)
(၃) ထိပ်စုမြတ်ဖုရား - သီပေါမင်းပါတော်မူစဉ်က စုဖုရားလတ်တွင် ကိုယ်ဝန်ပါရှိခဲ့ပြီး၊ ၇-၃-၁၈၈၆ နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဒရပ်မြို့၌ ထိပ်စုမြတ်ဖုရားကို မွေးဖွားခဲ့သောကြောင့် မဒရပ်စုဖုရား ဟုလည်း အမည်တွင်သည်။ သီပေါမင်းနတ်ရွာစံပြီးနောက် မယ်တော်နှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့တွင် လိုက်ပါနေထိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၂ ခုတွင် ကနောင်မင်းသားကြီး၏မြေး ထိပ်တင်ကိုယ်တော်ကြီး (တို့ဗမာအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ) နှင့် စုံဖက်ခဲ့ပြီး သမီး ထိပ်စုကြီးဖုရား ကိုမွေးဖွားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရေးပယောဂကြောင့် လင်မယားကွာရှင်းခဲ့ပြီး ၀တ်လုံ ဦးမြဦးနှင့် ထပ်မံလက်ဆက်ခဲ့သည်။ ၂၁-၇-၁၉၆၂ နေ့တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် မေမြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။ (သမီး ထိပ်စုကြီးဖုရား (ခ) မင်းသမီးရီတာ မှာ ၀မ်းကွဲမောင်တော်သည့် စတုတ္ထသမီးတော်၏ သား တော်ဘုရားနှင့် လက်ဆက်ခဲ့ပြီး သား ၄-ဦး၊ သမီး ၂-ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။)
(၄) ထိပ်စုမြတ်ဖုရားလေး - ၂၅-၃-၁၈၈၇ နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရတနာဂီရိ၌ မွေးဖွားခဲ့သဖြင့် ရတနာဂီရိ စုဖုရားဟု အမည်တွင်သည်။ (သီပေါမင်းနှင့် စုဖုရားလတ်တို့၏ အချစ်ဆုံးသမီးဟု ဆိုသည်။) သီပေါမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက် ရန်ကုန်သို့ပြန်လည်နေထိုင်စဉ် ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် ဦးကိုကိုနိုင် နှင့် စုံဖက်ခဲ့ကာ သား ၄- ဦး၊ သမီး ၂-ဦး မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၃-၃-၁၉၃၆ နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။ (တော်ဘုရားကလေး ဦးအောင်ဇေ မှာ စတုတ္ထသား ဖြစ်သည်။)
1:01 PMHEALTH No comments
၁- ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးနှင့်တကွ ကျောက်ကပ်နှင့်ဆိုင်တဲ့ ရောဂါများကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းမှလဲကာကွယ်ပေးခြင်း
၃- ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်မှုနှင့် အထူးသဖြင့် ရင်သားကင်ဆာသမားများအတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း
၅- ဖျားနာနေမကောင်းဖြစ်ပြီးလျှင် ကြံရည်သောက်သင့်တဲ့အဓိကအချက်ကတော့ နေမကောင်းဖြစ်ချိန်တွင်ပျောက်ဆုံးသွားသော
လိမ်းပြီး မိနစ်ပိုင်းထားပေးခြင်းကို ပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှကင်းဝေးစေခြင်း
၇- ကယ်လ်စီယမ်၊ကိုဗော့၊ကြေး၊မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ဖော့စဖောရပ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်နှင့်သံဓါတ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
၈- ဗီတာမင်များအနေဖြင့်လည်း ဗီတာမင် B1,B2,B3,B5 တို့ ပါဝင်ပြီး အမျှင်ဓါတ်နှင့်ပရိုတိန်းတို့ လည်းပါဝင်ပါတယ်။
G3 ရိုင်ဖယ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ
12:11 PMMYOPINION No comments
အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်း နဲ့ ဂျာမန် လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖရဇ်ဝါနာ ကုမ္ပဏီ( Fritz Werner Company )တို့ဟာ အတော်ကို ဆက်ဆံရေးကောင်းခဲ့တာပါ။
ပြည်တွင်းစစ်နဲ့တရုတ်ဖြူတွေရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရချိန် မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာလက်နက်အကူအညီ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုတွေကို အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်ကာလမှာပဲ ၁၉၅၃ ခုနှစ် မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းအပါအဝင် မြန်မာ့တပ်မတော်က အရာရှိကြီးတွေနဲ့ Fritz Werner တို့ဟာ ချိတ်ဆက်မိခဲ့ပါတယ်။ ။
အဲဒီတုန်းက ပထဆုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ လက်နက်ကတော့ BA 52 machine gun ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း “နေဝင်း စတင်း” ( Ne Win Sten ) လို့ လူသိများတဲ့ သေနတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၀ခုနှစ် မှာတော့ အနောက်ဂျာမဏီက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်အကြားမှာ ပိုမို ခိုင်မာတဲ့ သဘောတူညီချက် ရခဲ့ပြီး၊ ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဖက်ကမ်း ဒေသ(ဆင်တဲ)မှာ နာမည်ကြီး G3 ရိုင်ဖယ်ကို စတင်ထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
G3နဲ့ တခြား အော်တိုမက်တစ် ရိုင်ဖယ်တွေ အကြား ကွာဟချက်ကတော့ လေးလံပေမယ့်လည်း ကျည်အား၊ ယမ်းအား ခိုင်ခန့်မှုတွေက G3ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၂ မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အထိ အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာ ဦးနေဝင်းဟာ ဒီ လက်နက်တွေနဲ့ ခဲယမ်း၊ မီးကျောက် အထောက်အပံ့တွေကြောင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ ရဟန်းရှင် လူ၊ အလုပ်သမား လယ်သမား၊ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ လမ်းပေါ်တက် ဆန္ဒပြခဲ့ အုံကြွခဲ့တာတွေကို သေသေချာချာ နှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့တာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမန် လက်နက်ထုတ်စက်ရုံ ဖြစ်တဲ့ (Fritz Werner) ထုတ် လက်နက်တွေကို ဧရာဝတီက ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားများ မဖြစ်မနေဖတ်ပါ ဗမာ့ရာဇ၀င်ထဲကဖြစ်ရပ်မှန်လေးပေါ့
9:26 AMPOLITICALSCIENCE No comments
ရာဇ၀င်နဲ့ သမိုင်းနဲ့ မတူပါဘူး။ ရာဇ၀င်ဆိုတာကျဉ်းမြောင်းပြီး မင်းစိုးရာဇာနဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းအကြောင်းမျှသာဖေါ်ပြထားလို့ ပါပဲ။ သမိုင်းဆိုတာ ကျယ်ပြန့် ပါတယ်။ဗမာပြည်/ဗမာလူမျိုးရဲ့သမိုင်းဆိုတာ ယဉ်ကျေးတာထက် ရိုင်းတာတွေကများခဲ့လို့သမိုင်းမှာ အမှန်အတိုင်းမှတ်တမ်းတင် မော်ကွန်းရေးထိုးဖို့ မရဲခဲ့ကြပါဘူး သမိုင်းတုသမိုင်းလိမ်များသာ ရေးသားထုတ်ဝေဖြန့် ချိခွင့်ရကြလို့ သမိုင်းတုသမိုင်းယောင် တွေကိုသာ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်မောင်မယ်တို့ ကို အမှန်အတိုင်းရေးသားတင်ပြသွားပါ့မယ်။ ပုံပြင်လေးက ဒီလိုကွဲ့ ..........ဟိုးရှေးရှေးတုန်းပေါ့လို့ ဆိုပြီးတော့အစချီပြီးမပြောချင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပုံပြင်မဟုတ်ခဲ့လို့ ပါပဲ။
ဗမာလူမျိုးရဲ့မူလဇာတိရုပ်က အကျင့်နဲနဲကလေးမှ ကောင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ အုပ်ချုပ်ခံဗမာတွေ မဆိုထားနဲ့ အုပ်ချုပ်ခံဗမာတွေက တော်ဝင်မိသားစုလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဗမာမင်း/ဗမာဘုရင်တွေဆို ပိုပြီးတော့ အကျင့်ဆိုး အကြံဆိုးပါတယ်။ ပြောပြန်ရင်လည်း အောင်မင်းလွန်ရာကျမယ့်မထင်ပါ။မျောက်ပြဆန်တောင်းတဲ့ ဗမာ ဘုရင်တွေရဲ့စရိုက်ဆိုးကို ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလိုပါပဲ။
ဗမာဘုရင်တွေထဲမှာ မိန်းမအများဆုံးယူခဲ့တဲ့ မင်းတုန်းမင်း ( ငါးခြောက်သူခိုးမောင်လွင်)ဆိုတဲ့အကောင်ဟာ တရားဝင်မယား (၅၇) ကောင်ရှိပါတယ်။ အမြှောင်မယားက (၂၀၀) ကျော်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ မောင်းမ မိသံဆိုတဲ့ ဟာတွေကလည်း ရာကျော်ပါပဲ။
မယားတွေများစွာယူပြီး သားသမီးတွေ များစွာမွေးထားတော့ အချိန်တန်လို့မသာပေါ် သေခါနီးတော့ ဘယ်သူ့ ကို ထီးနန်းအရိပ်အရာ (ခွေးထိုင်ခုံ) ရာထူးပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်တောင် ဝေခွဲဆုံးဖြတ်မတတ်ခဲ့သူပါပဲ။
မွေးထားသူက သားသမီးကို မမှတ်မိတော့ သားသမီးတွေကလည်း မောင်နှမ တော်စပ်မှန်းကို မသိကြတာကမှားတယ် ။
အဖေတူအမေကွဲ ခွေးမျိုးတွေ ခွေးကျင့်ခွေးကြံအတိုင် ခွေးဇာတ်ခင်းကြတော့ နောက်ဆုံးခွေးကလေးတွေပဲ ပေါက်ပွားလာတဲ့သဘောပေါ့
အဲ့ဒီအထဲမှာ သီပေါဆိုတဲ့ ချာတိတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်နဲ့အောကားထဲက မင်းသမီးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ စုဖုရားလတ် ဆိုတာက နာမည်ကြီးပေါ့။
စုဖုရားလတ်ရဲ့အမေ မိဖယားကြီးဆိုတဲ့ ရှင်ဖြူမရှင် ဆိုတဲ့ကောင်မက ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက် သီပေါဆိုတဲ့အကောင်ကို သူ့ သမီးအကြီး စုဖုရားကြီး ဆိုတဲ့ ကောင်မနဲ့သဘောတူထားပြီးသား မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့နဲ့ မင်္ဂလာအချိန်အရောက်မှာ သူတို့ သမီး နေရာမှာ သမီးအလတ်မ ဖြစ်တဲ့ စုဖုရားလတ်က အတင်းအဓမ္မ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ မိဖုရားအရာကိုလုယူခဲ့ပါတော့တယ် ။
ဗမာဘုရင်တွေ လိမ်ညာလှည့်ဖြား ပြီး ဒမြတိုက်သိမ်းသလို သိမ်းယူပြီးထူထောင်ခဲ့တဲ့ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ရဲ့ တတိယ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ကြမ္မာတစ်ပါတ်လည်တော့ အလိမ်အညာနဲ့ဓါးမြတိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ တွေတော့ ၀ဋ်လည်ပြီး ပျက်ဆီးသွားတဲ့သဘောပါပဲ။မတန်မရာ နဲ့အာဏာကိုရယူထားတော့ ကျန်တဲ့ မယားကြီးတွေက မွေးထားတဲ့ သားကြီးသမီးကြီးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ အာဏာကိုလုထားသိမ်းထားသလိုဖြစ်နေတော့ လိပ်ပြာမသန့်တဲ့ သီပေါနဲ့အုပ်စုဟာ ကျန်တဲ့ အဖေ တူ အမေကွဲ ညီအစ်ကို အယောက်(၄၀) ကျော်ကို တစ်ချိန်တည်း/တပြိုင်တည်း/တစ်နေရာတည်းမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ လိမ်ညာခေါ်ယူပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဖမ်းဆည်းထားတဲ့ညီအစ်ကိုတော်စပ်သူတွေကို သတ်ပစ်ဖို့ အာဏာပါးကွက်သားတွေကို သတ်မိန့် ပေးထားပြီးတော့ သတ်မယ့်နေ့မတိုင်ခင် တစ်ပါတ်နဲ့သတ်ပစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအထိ နန်းတော် အရှေ့မှာ ဇာတ်ပွဲ/အငြိမ့်တွေနဲ့စည်ကားပျော်ပါး ဆူညံအောင်လုပ်ထားပြီးမှ နန်းတော်ထဲမှာတော့ လူသတ်ပွဲ ကြီးကျင်းပနေပါတယ်။ ဒီနေ့ အထိလည်း ဗမာတွေလုပ်နေဆဲပါ ပြည်သူတွေကို လှည့်စားပြီး နန်တော်ထဲမှာ လူသတ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပြည်သူတွေ မသိရှိခဲ့ရရှာပါဘူး။ လူသတ်ပွဲမှ အသတ်ခံရသူတွေထဲမှာ ကံကောင်းလို့ထွက်ပြေးလွှတ်မြောက်လာတဲ့ (၂) ယောက်က အင်္ဂလိပ်တွေရှိတဲ့ (ရန်ကုန်)အောက်မြန်မာနိုင်ငံကို ထွက်ပြေးခိုလုံ သွားနိုင်ခဲ့လို့အင်္ဂလိပ်တွေက ဗမာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့ အကြောင်းရှာတွေ့ သွားတော့တာပါပဲ ။ အခုခေတ်စကားနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် “ အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်မှု”
“လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု” ကြီးပေါ့ ။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း အင်္ဂလိပ်တွေရေးတဲ့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းစာမျက်နှာမှာ ဘယ်လိုရေးထားခဲ့သလဲဆိုတော့ “ ဗမာတွေဟာ အရိုင်းအစိုင်းတွေဖြစ်တယ်။မယဉ်ကျေးသူတွေဖြစ်တယ်။တိုင်းပြည်ကို မအုပ်ချုပ်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဗမာတွေကို ယဉ်ကျေးလာအောင် နဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တတ်အောင် သင်ပေးမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ဗမာပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ် ။ ကျူးကျော် သိမ်းပိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ ဆိုပြီးတော့ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာ ဒီကနေ့ အထိပါပဲ။
ꨟူမ်ꨳꨅူမ်းꨟပ်ꨵတွꨓ်ꨳ ꨀူꨓ်းမိူင်းတꨯးꨟဝ်း ꨁဝ်ꨳꨟူမ်ꨳပꨤ...
A peaceful world without war, oraworld with war ...
သိန်းနီ မြို. သည် စော်ဘွားများနေထိုင်ရာ ရှေးဟောင်း...
မနက်တိုင်း ဇနီးကို နမ်းသော အမျိုးသားများ သာမန် အမျ...
တိုင်းရင်းသားများ မဖြစ်မနေဖတ်ပါ ဗမာ့ရာဇ၀င်ထဲကဖြစ်ရ...